Hiran State - News Categories
Number of Items: 1540 · HS:-
· HS: Shir lagu qabtay Hotel Giyaajo
· HS:- Shir ka dhacay caasimada Sh/dhexe.
· HS:-Ciidamada Amisom ee Soomaliya jooga
· HS:-Siyaasada Dowlada Federalka
· HS:- Dhismayaashii ugu danbeyey ee laga hirgaliyo magaalada Belet-Weyne
· HS:- Soomaalida qurbaha oo ku maadeystaan Yusuf Garaad oo la rumeysan yahay in uu
· HS:-Shirkada Xawaalada Amaana Express oo marka siyaasada Hiiraan ka soo dhaxmuuqatay
· HS:-Wasiirka Qeyraadka dalka oo rajo beel ka muujiyey in uu ka mid noqon doono golaha wasiirada cusub kedib markii..
· HS:- Shirka madaxda ay ciidamadooda ka joogaan Soomaaliya uga socda
· HS:- Madaxweynaha Soomaaliya ma fashilin doonaan siyaasiyan labadan wasiir
· HS:- Nabadoonkaan hadlaya waxuu ka mid yahay
· HS:-Sawir gacmeedkii ugu danbeeyey oo laga sameeyo
· HS:- Magacaabidii golaha wasiirada oo laga yaabo in dib loo dhigo
· HS:- Jahwareer xoogan oo ka dhaxtaagan ciidamada Ahalusuna
· HS:- Kulan dhaxmaray Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khalif, nabadoono iyo dhalinyaro badan oo qurbaha ka tagay
· HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo r/wasaare Saacid iyo dhamaan xukumadiisa afka ciida u daraya
· HS:-Beesha Biyamaal oo ka mid ah beelaha Direed oo dagaal kula jira beesha Habargidir oo beero iyo guryo ka heysta
· HS:- Abwaan Hadraawi oo ka sheegeynayo taariikh nololeedkiisa
· HS:- Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo jooga meeshii siyaasadiisa lagu saxi lahaa...
· HS:- Madaxweynaha Soomaaliya oo taageero xoogan ka helay shacabka
· HS:- Shacabka Hiiraan oo siweyn u wada sugaya ciyaar dhawaan dhax mari doonta qaranka kubada cagta Hiiraan iyo koox ka socota walaalaha Jabouti.
· HS:-Ganacsatadii ugu badneyd ee ka soo jeeda qabiilka Hasan Daahir Aweys oo xayiraad lagu soo rogayo hantidooda
· HS:-Farshaxankii ugu danbeeyey oo laga sameeyo shaqsiyaadka siyaasada ku fashilmay
· HS:-Shaqsiyaad iskugu jira kuwo horey u iibsaday bada Soomaaliya, warshadii Mareerey
· HS:-Dhismaha Golaha wasiirada cusub oo meel fiican maraya iyo wada
· HS:- Qoraal ka hadlaya qaabkii uu dagaalada sokeeye uga qeybqaatay Yusuf Garaad.
· HS:-Wasiirka Qeyraadka dalka oo dib ugu soo moqonaya wadankii uu ka tagay
· HS:-Xaalada siyaasadeed ee xukumada r/wasaare Saacid oo aan cago badan...
· HS:- Madaxweynaha dowlada aanu walaalaha nahay ee Jabouti
· HS:-Saraakiishii ka socotay dowlada Ingiriiska ee dhawaan gaaray.....
· HS:- Magaalada B/weyne oo si weyn loogu dabaal degay
· HS:-Ugaaska Ugaasyada Soomaaliyeed marna ah...
· HS:-Hogaamiyaha Shabaab oo hubka dhigis ku haya haraadigii Hsan Daahir
· HS:-Wafti xoogan oo ka socda dowlada Jabouti oo iskugu ira siyasiyiin iyo fanaaniin gaaray magaalada B/weyne
· HS:- Tartankii loogu magac daray madaxweynaha Jabouti ee ka socday magaalada B/weyne
· HS:-Saraakiisha ciidamda Amisom iyo kuwa Ethiopia oo wadashaqeyn kala kulmay shacabka
· HS:- Madaxweynaha Soomaaliya oo ka fikiray midii uu qaadan lahaa in
· HS:- Goolashii ugu xiisaha badnaa ciyaarahii koobka aduunka 1998
· HS:- Magaalada B/weyne oo maanta lagu soo afjaray colaad mudo u dhaxeysay beelo walaalo ah
· HS:-Maamulka iyo shacabka Jubooyinka oo qaadacay shirkii ay dowlada iclaamisay
· HS:-Shir uu soo abaabulay wasiirka arimaha gudaha laguna heshiisiinayo beesha Habargidir oo lagu casuumay
· HS:-Shirkii ay dowlada sheegtay in ay Mogdishu ugu qabaneyso shacabka Jubooyinka
· HS:- Heestii loo qaadi jiray marka ay talada dalka la wareegaan mas
· HS:- Mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya oo Mogdishu iyoKenya..
· HS:- Madaxweynaha Soomaaliya iyo kooxdiisa oo mustaqbalkooda...
· HS:-Magaalada B/weyne oo ay ku soo badanayaan dhismayasa casriga ah
· HS:- Shacabka iyo dowlada aanu walaalaha nahay ee jabouti
· HS:- Waxgarad iyo siyaasiyiin reer Hiiraan ah oo Mogdishu kulan ku yeeshey.
· HS:- Shir ay ka soo qeybgaleen saraakiisha Amisom oo maanta ka dhacay B/weyne
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo heerka uu wali joogo mowqifka indheergaradka beesha Xawaadle
· HS:- Warmurtiyeed maamulka gobolka Hiiraan
· HS:- Hiiraan oo foolaneysa maamul goboleedkii 3aaad ee Soomaaliya ka hirgala
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey Siyaasada Soomaaliya
· HS:- Wasiirka Gaashandhiga Soomaaliya oo loo diiday inuu gudaha u galo caasimada 3aad iyo
· HS:- Wasiirka arimaha gudaha oo ah midka umada Soomaaliyeed kala fogeynaya
· HS:- Taariikhda Gobolka Hiiraan iyo Soomaaliya.
· HS:- Dagaalkii u dhaxeeyey beelaha Habargidir iyo Biyo Maal oo mar kale.
· HS:- Wasiirka qeyraadka iyo dhamaan siyaasiyiinta beesha Xawaadle uga jirta dowlada oo..
· HS:- Film xiiso badan looguna magac daray Made In Angola
· HS:- Qeybtii labaad Taariikhda Gobolka Hiiraan
· HS:- maamulkii kumeel gaarka ahaa ee Hiiraan oo lagu dhawaaqayo
· Shirkii ka socday magaalada Kismaayo
· HS:- Dadaalo xoogan oo lagu taageerayo dowlada Soomaaliya laguna horumarinayo magaalada B/weyne oo ka socda Hiiraan Sawirada isbuucaan Geela Hiiraan
· HS:- Wajigii labaad ee dalka loog asifeynayey kooxda Shabaab oo bilaabanaya
· HS:- Xakuu marayaa qorshahii ciidamada dowlada Ethiopia looga...
· HS:- Caqabadaha iyo sharuudaha qofka noqonaya madaxweynaha Hiiraan
· HS:-Ciidamada Amisom ee ku sugan Hiiraan oo aad u amaanay aqlaaqda iyo sida ay tababarada u qaadanayaan ciidamada Hiiraan ee
· HS:- TAARIIKHDA SIYAASADA SOOMAALIYA
· HS:- Dowlada Soomaaliya oo looga maarmi wayeymaamul u sameynta Jubooyinka kadib..
· HS:- Buug uu qorey aqoonyahan reer Hiiraan ah oo ka hadlaya taariikhda Soomaaliya
· HS:- Ganacsigii xoolaha ee koofurta Soomaaliya kala dhaxeeyey Puntland oo sii yaraanaya
· HS:- Shariif Hasan Shiikh Aden iyo ku dhawaad 60 xildhibaan oo lag ayaabo iney...
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey xaalada Soomaaliya iyo siyaasada arimaha dibada
· HS:- Xaguu marayaa dagaalkii siyaasadeed ee u dhaxeeyey dowladaha Kenya iyo Soomaaliya
· HS:- Beesha Majeerteen marka ay waayaan madaxtinimada dalka sidey iskugu dhax yaacaan daawo
· HS:-Howshii Maamul u sameysashada Hiiraan oo si habsami leh u socota
· HS:- Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo shir jaraa'id qabtay
· HS:-Gudoomiyahii gobolka Hiiraan C/fatax Hasan Afrax oo..
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo magaalada Kismaayo
· HS:-Shiikh Adan Madoobe Jubooyinka Hal beel ayaa maamul u dhisaneysa
· HS:-Why Kenya and Ethiopia ought to annex and divide Somalia
· HS:-Bulshada Hiiraan oo dhawaan yeelanaya maamul ay taladiisa iyo qaabeyntiisa hageyso dowlada Soomaaliya
· HS:- Gobolka Jubada hoose oo qarka u saaran
· HS- Deegaanada Puntland oo ay ka qaxayaan ganacsatada iyo siyaasiyinta kadib..
· HS:- Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya oo noqday shaqsiga ugu
· HS:-Masjid laga hirgaliyey Tuulada Gabo oo Hiiraan ka tirsan
· HS:- Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo waftigiisa oo si diirsan loogu
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo siyaasada Hiiraan
· HS:-Shiikh Umulow magacaa jirye qaar ka mid ah beesha Ogaadeen u nasteexeey
· HS:- Professor Jawaari oo u amba baxay dalka Ethiopia
· HS:- Shirkii Maamul u sameynta Jubooyinka oo isku bedeley mid ay sameysanayaan beelaha leysku yiraahdo Kablalax Daarood
· HS:-Kooxda Shabaab oo qorsheynaya iney dagaal xoogan ku soo qaadaan magaalada B/weyne
· HS:-Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Hasan oo ay ka fashilantay qorshe uu doonayey in uu
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey iyo meeshey wax u marayaan siyaasiyiinta reer Hiiraan ee
· HS:-Bulshada Hiiraan oo mudo 120 maalmood gudahood yeelanaya mamul goboleed
· HS:- R/wasaaraha Soomaaliya iyo safarkiisii magaalada B/weyne
· Siyaasiyiinta ka soo jeeda Hiiraan oo ku mashquulsan sidii loo heli lahaa maamul ...
· HS:- Madaxweyne Hasan Shiikh oo lag ayaabo in ay dowlada u madaxda ka yahay si lama filaan ah u fashilanto xili...
· HS-Mogdishu R/wasaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaraha...
· HS:- Kooxda Shabaab iyo qaabkii ay ugu jabeen dagaalka ay ku soo qaadeen magaalada B/weyne iyo qasaaraha soo gaaray heerka uu la eg yahay
· HS:-Garoonka diyaaradaha magaalada B/weyne oo ay dayacdir ku wadaan ciidamada Amisom
· HS:-Xulka qaranka Soomaaliya oo laga badiyey xili uu cidiyaha iyo faraha ku dagaalamayey si ay u guuleystaan
· HS:-Banaan baxyo ay soo abaabuleen maamulka Puntland oo looga soo horjeeday dowlada oo fashilmay
· HS:-Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo dowlada weydiistay iney ka caawiso
· HS:- Yurub iyo waxaan ku soo arkey Muxaadaro Shiikh Mohamed Cumar Dirir
· HS:- Dal sabool ah oo colaad ku soo jiray mudo sida Soomaaliya meeqa safaaradood ayuu
· HS:-Gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo dhawaan yeelanaya
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey arimaha Soomaaliya
· HS:- Xakuu ku danbeeyey mashruucii dhismaha garoonka diyaaradaha
· HS:- Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka oo siweyn looga qeyliyey hab dhaqankooda
· HS:-Madaxweynaha Jamhuuriyada oo galkiisa seefta kala baxay: "Ciddii lagu helo Kufsi waa dil toogasho,
· HS:-Xafiiska siyaasada Soomaaliya laga maamuli jiray ee UNPOS oo ay soo food saartay shaqo la,aan
· HS:- Magaalooyinka Jowhar iyo Bulo Burde oo qarka u saaran in ay ka bxaan gacanta
· HS:-Muuqaalka maamul goboleedka Hiiraan ee Soomaaliya
· HS:-Press Release- Presidency Denies Reuters Report
· HS:-Isbedelada ka curtay dalka Soomaaliya iyo waxqabadka madaxda qaranka
· HS:- Magaalada Gaarisa oo ka mid ah magaaloyinka waaweyn ee dhulka ay degaan
· HS:- Wasiirka cusub ee Kheyraadka Dr C/risaaq Cumar Mohamed maka bad baadi doonaa fashilkii ku dhacay wasiiradii isaga ka horeeyey ee reer Hiiraan
· MOGADISHU, Somalia (AP) –Somali parliament endorses downsized Cabinet in victory for new prime minister
· HS:- FARQI CENKEE AH BAA U DHAXEEYA XILDHIBAANADA BAARLAMAANKA EE SHALAY IYO KUWA MAANTA?!!
· HS:- Madaxweyne Hasan Puntland ma bad baadin doonaa?
· HS:-Hees loo qaaday madaxda qaranka
· HS:-Madaxweynaha Soomaaliya oo ku
· HS:- Magaalada B/weyne oo ay ku dhiban yahiin shan kun oo qoys kadib
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Soomaaliya
· HS:-R/wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo dhawaan lagu dhawaaqayo
· HS:- Xaflad lagu soo dhaweynayey madaxweynaha cusub
· HS:- Yaa sabab u ah amaan darada ka jirta Mogdishu?
· HS:- Dalka Soomaaliya oo siweyn loo hadal hayo qabiilka uu ka imaanayo R/wasaaraha cusub
· HS:- Beeraleyda Hiiraan o okordhiyey wax soo saarka beeraha
· HS:- Dowalda Kenya oo laga codsaday iney cadeyso eeedeyntii ay u jeedisay madaxweynahii hore ee Soomaaliya
· SH:- Aqoonyahano iyo siyaasiyin horey sadaal ugu bixiyey doorashadii madaxweynah iyo gudoomihah baarlamaanka
· HS:- Madaxweynaha iyo gduoomiyaha baarlamaanka oo shir wada qabtay
· HS:-Xaflado waaweyn oo lagu soo dhaweynayo m/weynaha cusub dal iyo dibad iyo
· HS:- Kooxda Ahalusuna oo aan wal,i darensaneyn in dalku yeeshey dowlad rasmia ah
· HS:- Beelaha Dir iyo Sade oo uu midkood ka imaanayo r/wasaaraha cusub
· HS:- Maxaad ka taqaan r/wasaaraha cusub ee ay Soomaaliya yeelaneyso dhawaan?
· HS:-Caawa iyo Mogdihsu
· HS:- Qiso yaableh oo ka dhacday magaalada Mogdishu oo dhax martay
· HS:- Doorashadii madaxweynaha Soomaaliya oo lagb ayaabo in ay dib u dhacdo
· HS:- Magaalooyinka Mogdishu, B/weyn iyo Baydhabo oo ay
· HS;-Maamulka Azania oo magaalada Kismaayo la wareegaya inta aan la dooran...
· HS:- Doorashada madaxweynaha Soomaliya iyo mida wasiirka 1aad oo lag ayaaboiney sanadkan waayan
· HS:-R/wasaarahii hore ee Soomaaliya Mohamed Cabdullaahi Farmaajo o la kashifay
· HS:- Malaayiin Soomaali ah oo maanta wajiyadooda laga dheehan karay faraxad kadib
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey arimaha siyaasada Soomaaliya
· HS:- Dalka Soomaaliya waayadan ma soo marin Gudomiye baarlamaan sida u fahamsan dastuurka wadanka
· HS:- Xildhibaanada cusub ee reer Hiiraan
· HS:- Madaxweynaha dowladda KMG ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobollka Hiiraan loo kala qeybiyay labo gobol
· HS:- shaqsiga lagu wado inuu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka
· HS:- Qaar ka mid ah waxgaradka beelaha Soomaaliyed oo rajo ka muujiyey in
· HS:-Shir dhaxmaray beelaha Hawiye iyo madaxweyne Shariif
· HS:- Xaflad lagu soo dhawerynayey gobolka Cusub ee uu yeeshey Hiiraan
· HS:-Liiskii beesha Xawaadle oo laga yaabo in laga saaro ragii laaluushka ku yimid
· HS:- Xukumadii R/wasaare Gaas oo si rasmi ah u dhacday caawa
· HS:-M/weyne Shariif, r/wasarahii waqtigiisa dhamaday C/wali gaas iyo Shariif Hasan oo
· HS-Gudiga farsamada oo iska fogeeyey liiskii ay soo bandhigeen koox uu horkacayo
· HS:-Liiska beesha Xawadle ee la soo bandhigay oo laga been sheegay iyo talooyin loo soo jeedinayo beesha.
· HS:-Reer Hiiraan oo isku diyaarinaya sidii ay hogaanka dalka ul awareegi lahaayeen
· HS:-SPEECH TO THE SOMALI COMMUNITY AND MEDIA IN MINNESOTA
· HS:- Daawo qaabka uu farshaxanka u sameeyo Amiin Caamir
· HS:-R/wasaarahii xukumadiisu waqtigeedu dhamaaday C/wali Gaas
· HS:- M/weyne Shariif oo Mogdishu siweyn loogu soo dhaweeyey
· HS:-Al Shabaab oo nin oday ah oo ay mudo heysteen sii daayey
· HS:- Ciidamada Maamulka Hiiraan oo
· HS:- Mudo sanad ah kadib wax qabadkii wasiirka qorsheynta qaranka
· HS:- Doorashadii ka dhici laheyd dalka Soomaaliya oo laga yaabo..
· HS:- Halyeey Cabdi Bile Cabdi oo ilmeeynaya
· HS:- Zamzam iyo Mohamed oo ciyaaraha olompikada u mataleyey Soomaaliya
· HS:-R/wasaarahii hore ee Soomaliya Farmaajo oo ay dartiis shacab u dhintaan xili
· HS:-Rajadii laga qabay in baarlamaanka cusub ay ku soo biiraan
· HS:-Tartankii Quraanka Kariimka ee bisha Ramadaan oo lagu soo gabo gabeeyey
· HS:-Haweenka Soomaaliyeed oo laga yaabo iney waayaan tiradii loo qoondeeyey kadib
· HS:-Doorashada madaxweynimada Soomaaliya iyo shaqsiyaadka la saadaalinayo iney ku guuleystaan
· HS:- Saxiixayaashu Seey rabaan?
· HS:-Diyaarad u sidey shixnad daawo ah isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa afar sano kadib ka degtay
· HS: Inaa lilaahi wa'inaa ilaahi raajicuun
· HS:- Shirkii Saxiixayaasha ee Kenya ka socday oo natiijo la,aan ku dhamaaday
· HS:- Madaxweynah Soomaaliya oo Mogdihsu lagu soo dhaweeyey
· HS:- M/weyne Shariif oo Mogdishu ku laabtay
· HS:-Xildhibaanada beesha Xawaadle ee la filay ineyka mid noqdaan baarlamaanka cusub
· HS:- R/wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka tirsan xukumadiisa oo lagu sakootiyey musuqmaasuq, xili doorasho adag la galay dhawaan
· HS:- Kooxda Shabaab oo bartamaha magaalda B/weyne kudileen Injineer Cali Xaaji Shirwac
· HS:- Baarlamaanka cusub oo horey loo qoondeeyey inuu noqon doono 225 kadibna gadaal loog adaray 50 mudane..
· HS:- Shirkii ansaxinta dastuurka
· HS:- Sawiro ku farxad galinayo oo laga sameeyey ciyaartooyda Soomaaliya
· HS:- Ciiyaartooyda Soomaaliyeed ee ka qeybleysa tartanka olompikada oo masaajidyada looga duceeyey in...
· HS:- Xildhibaanadii baarlamaanka cusub oo la soo xulay
· HS:- Degmada Matabaan oo dhawaan laga fulinayo mashaariic horumarineed xili ay maant agaareen halkaas...
· HS:- Bayaan lagu taageerayo Maaalik Cabdalle Farmashiye oo ka mid ah musharaxiinta reer Hiiraan..
· HS:-Madaxweyne Shariif iyo waxgaradka Hiiraan oo sidii hore iskaka soo dhawaanayo
· HS:-Malaayiin Soomaaliyeed oo habeenkii xaleyto aheyd farxad la ilmeeyey kadib
· HS:- Halyeey Cabdi Bile Cabdi oo taariikh lama iloowaan ah ku rebay Soomaalida maanta nool.
· HS:-Dalka Soomaaliya oo lagu dhawaaqay inuu yeelanayo 19 gobol,
· HS:- Shirkii ansaxinta dastuurka ooMogdishu ka furmay
· HS:- Shirkada Dahabshiil oo noqotay shirkada ugu macaamiisha wanaagsan
· HS:-Gabay la magac baxay dardaaran
· HS:-Beesha caalamka oo ka walwalsan ansaxinta dastuurka cusub
· HS:- Warsaxaafadeed: Hantida Shirkadda Dahabshiil iyo tan macaamiisheeduba waa mid Xafidan
· HS:- Ciidamo ka socda dalka Jabouti oo gaaray Hiiraan
· HS:-Qaar ka mid ah musharaxiinta reer Hiiraan ee u tartameysa baarlamaanka cusub.
· HS:- Shirkii lagu ansaxin lahaa dastuurka cusub oo mar kale baaqday
· HS:- Musharaxiitii reer Hiiraan ee u tartameysay baarlamaanka cusub oo aan wali soo xulin.
· HS:- Masuuliyiinta maamulada Hiiraan, Sh/dhexe iyo Banaadir
· HS:- M/weyne Shariif oo fariin cad u diray musharaxiinta faraha badan ee dooneysa..
· HS:-Musharaxiinta la saadaalinayo iney iskugu soo hari doonan doorashada madaxtinimada Soomaaliya
· HS:-Dhismo Masaajid oo laga hirgalinayo Tuulada Tusmo oo ku taala Hiiraan
· HS:-Waxaa bilaabanaya bisha barakeysan ee Ramadaan
· HS:-Wasaaradda Warfaafinta Oo Qalab Idaacadeed Gudoonsiiyay Masuuliyiinta maamulka Hiiraan
· HS:- Jaamacada Hiiraan oo labo sano jirsatay
· HS:- Magaalada Mogdishu oo laga dareemayo sasaan nabadeed
· HS:-Xaguu ku danbeeyey ololahii doorashada ee musharaxa Professor Warfaa
· HS:-Shir uu soo qaban qaabiyey musharaxa xildhibaanimada Soomaaliya Dr Cali Warfaa Cadow oo ka dhacay Mogdishu
· HS:-Wakiilkii Ugaaska beesha Xawaadle u wakiishay arimaha siyaasada oo Mogdishu dib ugu laabtay
· HS:-Musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Professor Warfaa iyo walaalkii Xildhibaan Cumar Ugaas Muumin oo ku guuleystay iney soo xulaan.
· HS:-Magaalada B/weyne oo wadadii horumarka afka saartay iyo maamulka Hiiraan
· HS:- Diyaar garoow iyo soo dhaweyn aan caadi aheyn oo ka socota caasimada Hiiraan
· HS:-Magaalada Mogdishu oo marti u noqoneysa ciidamadii ugu badnaa ee socda .
· HS:- Shabaabkii ku haray qeybo ka mid ah Hiiraan oo .
· HS:- Ciyaar kubada cagta ah oo lagu maamuusayey 1-da Luuliyo ooka dhacday
· HS:- Hiiraan oo siweyn loogu dabaal degay munaasiabda 1da Luuliyo
· HS:-M/weyne Shariif oo awoodiisa iskugu geeynaya sidii gudoomiyaha cusub ee baarlamanka uga imaan lagaa beelaha Digil iyo Mirifle
· HS:-M/weyne Shariif oo sedax sano kadib dhinaciisa halmar ka waayey siyaasiyiinta reer Hiiraan
· HS:- Axmed C/salaan oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo xili lagu dabiibayo dalka Kanada
· HS:- Dhismaha suuqa cusub ee magaalada B/weynee
· HS:- Dr A/nur Hussien Boodaaye waa musharax u taagan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya
· HS:-Abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Mustafa Shiikh Cilmi oo soo saaray buug cusub
· HS:- Dowladaha Mareykanka iyo Kuwait oo labo garoon oo caalami ah ka kala dhisaya Hiiraan iyo Soomaaliland
· HS:-Midkeebaa dalka Soomaaliya u roon dhawrka dastuur ee leysku barbar wado
· HS:- Maamulka Hiiraan oo ku guuleystay ka hortaga kooxahii qaraxyada geeysan jiray
· HS:- Shirkii ay dalka Jabouti uga qeybgaleen madaxa maamulka Hiiraan iyo wafti uu hogaaminey oo la soo gabo gabeeyey
· HS:- Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah
· HS:- Madaxa maamulka Hiiraan oo qudbad taariikhi ah ka jeediyey...
· HS:- Ahalusuna Galgaduud oo bur buray iyo Shabaab....
· HS:- Wafti ka socda AMisom oo siweyn loogu soo dhaweeyey Hiiraan
· HS:-Magaalada Mogdishu oo dibda looga saarayo Police-ka Soomaalida
· HS:- Kala hadalka wasiirka arimaha gudaha safarkii Hiiraan kadib
· HS:- Wasiirka arimaha gudaha oo waji gabax siyaasadeed kii ugu sumaa maanta kala kulmay Hiiraan
· HS:- Waftigii ka socday USAID ee dhawaan gaaray magaalada belet Weyne oo sheegay iney magaaladu tahay magaalo aad u qurux badan
· HS:- Shirweyne dalka Jabouti ka furmay iyo wafigii uu hogaaminayey madaxa Hiiraan oo gaaray dalka Jabouti
· HS:- Wasiirka arimaha gudaha oo ku hanweyn inuu booqdo caasimada Hiiraan xili uusan booqan karin..
· HS:-Maxaa ka jira in ciidamo u dhashay beesha Habargidir ay maanta garoonka diyaaradah Mogdishu
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Soomaaliya
· HS:- Wafi iskugu jira waxgarad, aqoonyahano, iyo masuuliyiinta maamulka Hiiraan oo dalka Jabouti u dhoofay
· HS:- Beesha Cali Madaxweyne oo ka mid ah beelweynta Xawaadle oo geeridii Xaaji Abdulaahi Fiidow kadib
· HS:-Soomaali ma heli karaan madax ka madax banaan musuqmaasuq?
· HS:- War deg deg ah: Magaalada Kismaayo oo qarka u saaran in lagala wareego Shabaab
· HS:- Saraakiishii ugu badneyd ee Shabaab ka tirsan oo ku sugan Hiiraan
· HS:- Dalka Soomaaliya oo ay hogaamin doonaan wajiyo cusub min baarlamaan ilaa hogaanka sare.
· HS:-Wakiilkii Ugaaska beesha Xawaadle u wakiishay arimaha siyaasada Faarax Ugaas Muumin oo isagane ku sii wareejiyey walaalkiis Xildhibaan Cumar Ugaas Muumin
· HS:- Qaar ka mid ah beeraha Hiiraan
· HS:- Shirkii Istanbul oo la soo gabo gabeeyey
· HS:-HS: –Ciidamo ka socda dalka Jabouti ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Belet Weyne
· HS:-SIYAASIGA WEYN EE REER HIIRAAN CILMI FAARAX WABI OO QORAAL DHEER KA QORAY DASTUURKA
· HS:-La taliyaha hogaamiyaha Hiiraan Max'ud Diiriye Max'ed oo la yaaban sida ay waqti u siinayaan maamulka cusub taageerayaasha Hiiraan State
· HS:- Dugsi sare oo ay wax ku baran karaan dhar kun oo ardey oo laga hirgaliyey degmada Moqokori oo ka tirsan dhulweynaha Hiiraan.
· HS:- Qiimaha lagu dhiso amaba la kala siisto guryaha Villooyinka ah oo markii ugu horeysay si
· HS:- Dowladaha Mareykanka iyo Yurub oo qodobo qasab ah u dhiibay saxiixayaashii Roadmapka kadib
· HS:-War deg deg ah: Shabaabkii ugu badnaa ee laga soo saaray Sh/hoose oo ku sii qul qulaya Jowhar iyo Bulo Burde
· HS:- Waa sidee xaalada magaalada afaraad ee ugu weyn Hiiraan
· HS:- Maamulka cusub ee Hiiraan oo laga yaabo iney taageero xoogan ka helaan qurba joogta
· HS:-Heesaha sanadkaan loo qaaday magaalada Belet Weyn
· HS:- Halkan ka daawo xafladii Jaamacada Hiiraan
· HS:- Xaflad weyn oo abaalmarin lagu gudoonsiinayey dhalinyaradii
· HS:- Horumarka Hiiraan kaalin intee la eg ayey ka qaadan karaan shirkadaha waaweyn ee ka howl gala Hiiraan
· Tacsi: Inaa Lilaahi wa'inaa Ilaahi raajicuun.
· HS:- Maamulka Hiiraan oo ka soo qeyb galay xafladweyn oo lagu soo dhaweynayey Busas ay qurba joogta u iibiyeen Jaamacada Hiiraan
· HS:- Dabaal degyo waaweyun oo ka socda Dubai iyo Manchester.
· HS:- HS:-Maamulka Hiiraan oo si nabad ah ula wareegay degmada Maxaas.
· HS:- Duqa degmada B/weyne oo sheegay in la bilaabayo olole nadaafadeed dhawaantan.
· HS:-Masuuliyiinta Hiiraan oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in ay kooxda Shabaab odoyaal dhaqameed ka afduubteen Hiiraan.
· HS:- Suxufiga caanka ah Ayaanle Hussien Abdi oo wareysi kooban ka qaaday wasiirka dastuurka.
· HS:- Maamulka cusub ee Hiiraan oo dayac dir xoogan ku sameeyey xabsiga dhexe iyo saldhiga booliska magaalada B/weyn,
· HS:-Masuuliyiintii Hiiraan State oo taageeray maamulk acusub ee Hiiraan
· Hs:- Daawo horumarka Africa iyo heerka ay Soomaaliya mareyso maanta
· HS:- Hiiraan the best place to be
· HS:-Golaha Deegaanka Magaalada Beledweyne oo doortay Duqa Degmada
· HS:- Xarakada Al Shabaab oo gacanta ku dhigtay magacyada odoyaasha doonaya iney ansaxiyaan dastuurka
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo Hiiraan
· HS;- Shiikh Umul oo ka mid ah culimada ugu caansan oo dhaliilay dastuurka cusub
· HS:-Shirkadahii dhaqaalaha ku bixiyey dastuurka cusub oo kul ataliyey madaxda
· HS:-Mahiga oo afka furtay kadib markii uu ku fashilmay
· HS:-YAA UGAR NAQAYA DOWLAD IYO DASTUUR ?
· HS:- Professor Warfaa oo soo dhaweyn diiran kala kulmay Dubai
· Abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Ahmadey Abdi Gaashaan oo laga rebay..
· HS:-Dastuurka cusub oo ah mid loogu talo galay wadan
· HS:-Bulshada Hiiraan oo bilaabay kala xulashada magacyada ay noqonayaan labada gobol ee
· HS:- TFGda oo dhaqaalahii laga jaray iyo baarlamaanka oo la horkeenayo ...
· HS:-Professor Warfaa oo taageero iyo soo dhaweyn
· HS:- Garoonka diyaaradaha magaalada Belet Weyn
· HS:- Dadaalo lagu sakootinayo Professor Warfaa oo ka socda London
· HS:-Baarlamaanka Soomaaliya oo madaxweyne dooranaya bisha..
· HS:-Musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyada fedralka Soomaaliya Prof Warfaa oo la kulmay ..
· HS:- Sawiradii soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Professor Ahmed
· HS:- Musharaxa madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya Professor Warfaa oo ka dhoofay ..
· HS:- Bur Bur ku yimid dastuurkii la doonayey in dalka loo sameeyo iyo...
· HS:- Magaalada Belet Weyne oo ay ka socoto
· HS:- Mogdishu oo siweyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha mustaqbalka
· HS:- Wararkii ugu danbeeyey Safarka London iyo
· HS:- Masuulka ugu sareeya Hiiraan oo siyaasado fir fircoon la soo baxay
· HS:- Musharaxiin badan oo araajidooda gaarsiiyey baarlamaanka
· HS:- Xerta Allaa Shiikh oo maamul u sameysatay Sh/dhexe iyo
· HS:-Maanta iyo siyaasaa Soomaaliya, Shariif Hasan, Puntland, Roadmapka iyo dastuurka
· HS:- Xildhibaanadii ugu badnaa oo ku sugan Mogdishu
· HS:-Shariif Hasan oo ay beesha caalamka ku xireen sharuud adag.
· HS:- R/wasaaraha iyo madaxweynaha oo Villada ninba
· HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa oo siweyn looga
· HS:-Qaban qaabada doorashada m/weynimada Soomaaliya oo
· HS:-Khilaaf iyo kala shaki ka jira xarunta Villada
· HS:- Gudiga qaban qaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo shaaciyey..
· HS:-M/weynaha mustaqbalka Soomaaliya Prof Warfaa oo
· HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya
· HS:- Maamulka gobolka Hiiraan oo dilay nin
· HS:-Garoonka diyaaradaha magaalada Belet Weyne oo
· HS:-Xerta Alaa Shiikh oo maanta qaraxweyn ka geystay golaha murtida
· HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Soomaaliya.
· Golaha Horumarinta Midnimada Xawaadle Ee UK Oo
· HS:- Qorshahii Roadmapka iyo dastuur u sameynta dalka oo laga hor yimid
· HS:- Doorashadii madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay waqtiga ay.
· HS:- Shirar hoose oo u socda baarlamaanka, beesha caalamka iyo QM
· HS:-Magaalada Halkan ee gobolka Hiiraan oo mar kale
· HS:- Xubnahii golaha Beelweynta Xawaadle
· HS:- Kulan balaaran oo ay mudanayaasha baarlamanka ku yeesheen Mogdishu.
· HS:- War deg deg ah: Beesha caalamka oo ka soo horjeesatay qodobadii lagu gaaray Galkacyo
· HS:- Qodobada ay ku heshiiyeen saxiixayaashii Garoowe.
· HS:- Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya
· HS:- Maxaad kala socotaa meesha ay ku danbeysay hantidii guud ee qaranka?
· Geeridu Waa Xaq
· HS:- Maamulka cusub ee Hiiraan oo siweyn loo.
· HS:-Siyaasadaha isdiidan ee madaxweyne Shariif, R/wasaare Gaas iyo go,aanka .
· HS:-Ciidamada Hiiraan oo dagaal saf balaaran ah ku qaadaya degaano ka mid ah Hiiraan
· HS:- Isbedel weyn oo laga dareemayo Hiiraan
· HS:-Diyaarada Turkiga ee duulimaadyada ka bilaawday Mogdisho oo loo heshiiyey
· HS:-Siyaasadii guud ee dalka oo ku soo aruurtay baarlamaanka Soomaaliya
· HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Soomaaliya
· HS:- Milkiilaha idaacada Shabelle oo lagu eedeeyey inuu ka danbeyey dilkii wariye Fantastic.
· HS:- Ciidamo ka socda dowlada Jabouti
· HS:-Xaalada nabadgalyo iyo siyaasadeed oo laga deyrinayo
· HS:- Bulshada Hiiraan oo soo dhaweeyey maamulka cusub
· HS:-Hiiraan oo maamul cusub yeelatay
· HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo eedeyn kulul u jeediyey
· HS:- War murtiyeed ka soo baxay xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya
· HS:-HS:- Maxaad kala socotaa hagardaamada ay bulshada Hiiraan ku hayaan madaxweyne Shariif iyo
· HS:- Xerta Allaa Sheekh oo hub casri ah kala soo degaya Sh/dhexe
· HS:- Shirweyne laga soo shaqeeyey oo ay iskugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee beesha Xawaadle
· HS:- Natiijadii ka soo baxday shirkii Garoowe 1 iyo 2
· HS:- Xarumahii dowlada oo la kala iibsanayo magalada Mogdisho
· HS:- Magacii Doxada Shabelle oo daaqada laga tuuray kadib
· HS:-Ururweynahii Shabaab oo magacii laga bedelay
· HS:-Golaha Amaanka oo shegay in TFGda ku egtaya bisha 8aad
· HS:- Qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo talooyin dhaxal gal ah siiyey..
· HS:- Maamul goboleed looga dhawaaqayo Bay iyo Bakool uuna qeyb ka yahay Abuu Mansuur Roobow
· HS:- Kadib 52 sano oo markii labaad uu dalka Soomaaliya hogaaminayo shaqsi ka
· HS:- Mahiga oo afka furtay kadib markiiuu arkey baarlamaanka Soomaaliya oo awoodiisa korortay.
· HS:- Gobolka Sh/dhexe oo ay isku aruursanayan..
· HS:- Sawirada isbuucaan ma ka bixin laheyd gurigan 29 Million oo Dolar hadii aad awoodo? Sawiro
· HS:- Wararka iyo siyaasada Soomaaliya ee maanta
· HS:- Maamulka Dooxada Shabelle oo magaca iska bedeleysa
· HS:- Ciidamada Hiiraan oo jabweyn u geystay kooxo Al qacida ka tiran oo weerer ku soo qaday magaalada .
· HS:- Ciidamada Hiiraan oo ay isku soo dhiibeen dagaalyahano Shabaab ka tirsan.
· HS:- Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Sakiin oo ka tanaasulayo
· HS:- Doorashadii madaxweynaha oo dhawaantan ka bilaabaneysa dalka Soomaaliya.
· HS:- Ciidamada dowlada kumeel gaarka oo la il daran mushaar la'aan, halka ciidmada Amisom heleen mushaar kordhin.
· HS:-Baarlamaanka Soomaaliya oo kulamo la yelanaya beesha caalamka ka hor doorashada ay iclaamiyeen
· HS:- Shir lagu soo dhaweynayey wasiirka qorsheynta iy xiriirka caalamiga oo ka dhacay Kenya
· HS:- Madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya Professor Warfaa oo
· HS:- Madaxweyne Shariif oo waji gabax kala kulmay jaaliyada Soomaalida ee UK kadib markii
· HS:- Warqad ka soo baxday xafiiska gudoomuaha baarlamaanka
· HS:- Hiiraan iyo maanta
· HS:- Idaacada Radio Mogdisho oo ku hadasha codka dowlada oo uu saameeyey qilaafka.
· HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo xilka ka xayuubinaya madaxweyne Shariif
· HS:- Shirkii London oo ku so odhamaday in Soomaalida la maamulayo.
· HS:- Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
· HS:- Mareykanku ma aqbalayo in hal maalin lagu daro xiliga u harsan TFGda.
· HS:-Shabaabka Bulo Burde oo ay la soo daristay cabsi kadin markii
· HS:- Wasiirada, Xildhibaanada iyo waxgaradka Hiiraan oo
· HS:- Yaa dalka Soomaaliya galiyey maxmiyada?
· HS:-Maxaad ka taqaan shirkadaha iyo siyaasiyiinta la doonayo in xabsi loo taxaabo shirka London kadib?
· HS:-Waxgaradka, siyaasiyiinta iyo qurba joogta Hiiraan oo sheegay iney bari ka yahiin waxii ka soo baxay Garoowee
· Tartanka ciyaarahii ka socday magaalada Belet Weyne oo meel xasaasi ah maraya
· HS:- Waxgarad ku hadlaya magaca beesha Habargidir oo ka soo horjeestay in laga baxo xarumah ay dowladu leetahay.
· HS:- Ciidamo badan oo al qacida ah oo gaaray Jowhar iyo Bulo Burde
· HS:- Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hiiraan State.
· HS:-Shirkii Garoowe oo ay ka soo baxday qodobo ay ku heshiiyeen
· HS:- Beesha Cabdi Yusuf oo ka tirsan beelweynta Xawaadle oo doortay nabadoon cusub.
· HS:- Maxaa ka jira in Shiikh Shariif hub casri?
· HS:-Xildhibaano kor u dhaafaya 270 Xildhibaan oo Cod Aqlabiyad kaga soo Horjeestey Shirka ka Furmey Magaaladda Garoowe
· HS:- Ciyaarahii kubada cagta oo ka bilaawday Belet Weyn
· HS:- Wasiirada iyo xildhibaanadii dhawaantan gaaray Hiiraan oo taagero shacab ka helay bulshada Hiiraan
· HS:- Labada Shariif oo iska gaashanaya bur burinta baarlamanka Soomaaliya
· HS:- Ciyaarahii qaramada Africa
· HS:- Hees cajiib ah oo loo qaaday Hiiraan
· HS:- Shir dhinaca isgaarsiinta ah oo dhax maray
· Wararkii ugu danbeyey iyo dagaalkii Belet Weyne
· HS:- Dagaal u dhaxeya Al qacida iyo ciidamada Hiiraan oo ka dhacay Belet Weyne
· HS:-Waa maamul ceynke ah maamulka loo sameynayo Hiiraan?
· HS:-Kulamadii baarlamaanka Soomaaliya oo joogta u socda iyo
· HS:-Shacabka magaalada Belet Weyne oo talaabo kudayasho mudan horey u qaaday.
· HS:-Heshiisyo horu dhac ah oo ay gaareen beelaha Sade iyo Absame.
· HS:-Heeso Soomaali Dawasho wacan
· HS:- Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dhismayaasha dowlada ee xooga lagu heysto
· HS:-Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in aan loo dulqaadan doonin
· HS:- Madaxa Dooxada Shabelle oo markii uu Mogdisho tagay... ...
· HS:-Dowlada Jabouti oo noqotay dowaldii ugu danbeysay ee maqasha in Somaliya la galinayo maxmiyad
· HS:- Wafti ka socda QM oo gaaray Hiiraan.
· HS:- Mudadii ay xukumada u qabatay in laga baxo xarumaha
· HS:-Ciidamo Shabaab ah oo doonaya iney isku soo dhibaan ciidamada Hiiraan
· HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo doortay gudoomiye kuxigeen cusub
· HS:- Dowladaha reer galbeedka oo cadaawad ba'an u qaaday dowlada Turkiga.
· HS:- Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta
· HS:- Qoysaska degan xarumaha dowlada oo sheegay in laga gireeyey.
· HS:- Kulan lagu taageerayey maamul u sameynta Hiiraan oo ka dhacay magaalada Belet Weyne
· HS: -Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Madoobe Nuunow Moh’ed oo sheegay in uusan shirka London
· HS:-Dhismahii maamul u sameynta Hiiraan
· HS:- Shir kooxda Ahalusuna uga socday magaalada harar oo ku dhamaaday natiijo la,aan.
· SH:- Shirweyne looga hadalyey isbitaalka guud
· HS:-Ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dilay wariye Fantastic
· HS:-Ciidamada Hiiraan oo dagal isku diyaarinaya, halka maamul looga dhawaqayo Hiiraan
· HS:-Hiiraan iyo maanta
· HS:-Dalka Libiya oo la galiyey maxmiyad halka Soomaaliyana biraha loo tumanayo.
· HS:- Qurba joogta Soomaaliyed oo ku sii qulqulaya Mogdisho
· HS:-Magaalooyinka Dhuuso-Mareeb,Guriceel iyo Cadaado oo laga yaabo in ay qaaliyoobaan.
· HS:-Hiiraan oo maamul yeelaneysa.
· HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo qaadacay shirka London
· HS:- Wararkii ugu danbeyey qaraxii maanta ka dhacay Hiiraan
· HS:- Shirka London oo lagu wado in dalka Soomaaliya loo dhibo dowlada
· HS:- Qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Belet Weyne.
· HS:-Wararkii ugu danbeyey iyo magaalada Belet Weyne
· HS:- Magaalada Belet Weyne oo la ciir ciireysa waxgarad, aqoonyahano, iyo siyaasiyiin kadib markii ay halkaasi gaareen.
· HS:-Wafti balaaran oo ka socda dowlada federalka oo ku soo wajahan Hiiraan.
· HS:- Xildhibaanda baarlamanka kuwooda taageersan gudoomiaha cusub Madoobe Nuunoow Mohamed oo ku.
· HS:- Al Shabaab oo afka ka ilaalinaya waanu jabnay
· HS:- Dagaalo saf balaran ah oo laga daremayo Banaadir,Hiiraan, Gedo iyo J/hoose
· HS:-Xildhibaan Waare oo qurba joogta reer Hiiraan hawada marinaya in ay.
· HS:-Tiradii ugu badneyd ajaaniibta kusugan Soomaaliya oo ku geriyootay Tuulada
· HS:-Xildhibaanada TFGda kaka sugan Hiiraan oo laf dhuungashay ku noqday Shiikh Shariif.
· HS:- Mudanayaasha baarlamaanka oo Dooranaya.
· HS:- Haraadigii Shabaab oo laga ugaarsanayo duleedka galbeed ee magaalada Belet Weyne
· HS:-Maxey tahay ujeedada ka danbeysa iyo danaha gaar ah?
· HS:- Wararkii ugu danbeyey waftigii ka socday QM midoobay ee maanta gaaray Belet weyne.
· HS:- Wafti ka socda Qaramada Modoobey oo gaaray Hiiraan.
· HS:-Magaalada Bulo Burde oo noqotay goob ka caagan Shabaab kadib.
· HS:- Wararkii ugu danbeyey iyo magaalada Belet Weyn.
· HS:-Wararkii ugu danbeyey Hiiraan
· HS:-Dood dhax martay Dooxada Shabelle iyo Hiiraan State
· HS:- Degmada Maxaas oo lagala waregay Shabaab
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey kulan dhax maray madaxweyne Shiikh Shariif iyo xildhibaanada reer Hiiraan.
· HS:- Ciidamadii ugu badnaa oo ku wajahan Bulo Burde
· HS:- Waa maamul noocee ah Dooxada Shabelle, taageere intee la og ayuuna ku heystaa Hiiraan?
· HS:-Jahwarer siyaasadeed kii ugu xumaa oo Shiikh Shariif ka heysta Hiiraan.
· HS:- Guddi ka shaqaynaya amaanka magaalada Belet Weyne ayaa lagu dhawaaqay kadib kulamo joogta ahaa oo maalmahan ka
· HS:-Rag muhiim ah oo Shabaab looga qabtay Hiiraan.
· HS:-Xoogaga Hiiraan ee Shabaab ka saaray magaalada Belet Weyn oo dhawaantane
· HS:- Maxuu siyaasigan kaka duwan yahay siyaasiyiinta kale ee ka soo jeeda Hiiraan?
· HS:- Awoodii Shabaabka Hiiraan, J/hoose iyo Gedo oo wiiqantay
· HS:- Xildhibaanada ku sugan magalada Belet Weyne oo ku guuleysan raba iney.
· HS:-Isbedelo muuqda oo ka socda magaalada Belet Weyne
· HS:-Xaalada Guud ee magaalada Belet Weyne.
· HS:- Xukumada R/wasaare Gaas oo qarka u saaran iney
· HS:- Baaq Nabadeed ka soo baxay beesha Xawaadle ee UK
· HS:- Shir ay iskugu yimaadeen jaaliyada beesha Xawaadle ee UK oo ka dhacay magaalada Birmingham City
· HS:- Shirar ay beelaha Hiiraan si gooyni gooyni ah iskugu arkayaan oo Hiiraan ka bilaawday.
· HS:- Shabaab oo ka guuraya Bulo Burde saldhiga ugu weyna ka sameystay
· HS:- Gudoomiyaha baarlamanka Somaliya Madoobe Nuunoow Mohamed oo xukuamda ka codsaday iney hor timaado
· HS:- Xaalada guud ee ciidanka Shabaab ka jooga magalda Bulo Burde iiyo jalalaqsi.
· HS:- Sawiradii ugu danbeeyey iyo Hiiraan
· HS:- Xildhibaanada reer Hiiraan oo Mogdisho ku kulmay.
· HS:- Dowlada kenya oo soo dhaweysay go,aankii uu baarlamanka Soamliya ku doortay hogaanka cusub.
· HS:- kulankii waftiga R/wasaaraha dowlada Soamliya ku tagay Hiiraan.
· HS:- Wararkii ugu danbeyey Hiiraan iyo safarkii R/wasaare Gaas.
· HS:- Wafi uu hogaaminayey R/wasaaraha Somaliya oo si diiran loogu soo dhaweeyey Hiiraan
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey iyo magaalada Bulo Burde
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey xaalada guud ee magaalda Belet Weyne iyo guud ahaan Hiiraan.
· HS:-Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Hsan Shiikh Aden oo laga joojiyey
· HS:- Gudoomiyaha cusub ee barlamanka Madoobe Nuunoow mohamed oo caawa qudbadiisii ugu horey
· HS:- Dib u dhac ku yimid safarkii ay Hiiraan ku tagi lahaayeen wafti ka socda TFGda kadib
· HS:- Gudoomiyaha baarlamaanka kumeel gaarka oo loo doortay Madoobe Nuunoow Mohamed.
· HS:- Doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka oo socota iyoMadoobe Nuunoow oo lagu wado inuu noqon doono gudoomiyaha cusub.
· HS:- Rajada laga qabo in uu gudoomiye baarlamaan sii ahado Shariif Hasan oo meesha ka baxday iyobaarlamanka oo dooranaya gudoomiye cusub.
· HS:- Wafti balaaran oo ka socda TFGda oo uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga oo ku sii jeeda Hiiraan.
· HS:- Ciidamada Shabaab kaka sugan magaalada Bulo Burde oo ay soo wajahday cabsi xoogan kadib markii si lama filaan ah loo helay.
· HS:- Muran horu dhac ah oo soo kala dhex galay ciidamada Shabaab kaka sugan magaalda Bulo Burde
· HS:- Waxgarad, siyaasiyiin iyo aqoonyahano ugu baaqay beesha caalamka in gar gar lala garo bulshada Hiiraan.
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya Bulo Burde iyo nawaaxigeed iyo dhaqdhaqaaqa Shabaab.
· HS:-wararkii ugu danbeeyey kooxda Shabaab iyo jabkooda
· Degmada Maxaas oo laga hirgalinayo Isbitaal casri ah.
· HS:- Xiriirka TFGda iyo shacabka Hiiraan ayaa laga yaabaa inuu soo hagaago bilaawka sanadkan cusub
· HS:- Ciidamo ka tirsan shabaab oo lagu dilay magalada Belet Weyne , halka lagu raad joogo kuwa kale.
· HS:- Xaalada guud ee Hiiraan iyo maanta
· HS:- Maxuu ku dhamaaday shir ay maanta iskugu yimaadeen TFGda loogana hadlayey xaalada Hiiraan?
· HS:-Madaxweynaha Hiiraan State Eng. Maxamuud Cabdi Gaab oo gaaray dalka Kenya kadib
· HS:- Qaar ka mid ah ragii mali galin jiray iyo horjoogayaal shabaab ka tirsanaa oo xalay ku hoyday Saldhiga Magaalada Baladweyne
· HS:- Ciidamadii ugu badnaa oo iskugu jira Ethiopian iyo xoogaga Hiiran oo u dhaqaaqay magaalada.
· HS:-Xaalada guud ee magaalada Belet Weyne iyo halka uu ku sugan yahay hogaamiyahii Shabaabka Hiiraan.
· HS:-Wararkii ugu danbeyey iyo Hiiraan qaxooti Shabaab ah oo caawa gaaray
· HS:-Saadaasha iyo mustaqbalka bulshada reer Hiiraan iyo fowdadii joogtada aheyd ee TFGda.
· HS:-Waabaa baryayey bilicsan arooryo baxsan maalin boqran sanad wacanaan dhamaan Bulshada reer Hiiraan meelkasta oo ay joogaan.
· HS:-Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soodhaweeyey guusha ay gaareen ciidmada reer Hiiraan
· Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaaraya Golden State Hiiraan.
· HS:-Dagaal saf balaaran ah oo ka bilaabmaya dhawr gobol oo Soamliya ka mid ah.
· HS:-Madaxweynaha Hiiraan State oo siweyn loogu soo dhaweyey dalka Yugandha.
· Madaxweyne Shiikh Shariif oo gacantiisa ku bur buriyey dowladii uu madaxweynaha ka ahaa kadib.
· HS:-Qaar ka mid ah mudanayasha baarlamanka oo ku tilmaamya shirkii Garoowe mid.
· HS:- Sheeko loogu magac daray Mala Awaal oo laga sameeyey madaxweyne Shariif xili uu ku sugnaa Garoowe (Ogaal Radio)
· HS:-Dalka Soomaaliya oo laga yaabo in loo weeciyo ciidamdii MAreykamka ee laga soo saaray Afganistan iyo Iraq kadib
· HS:-Darussalam Masjid and Cultural Centre
· HS:-Shirkii ugu weynaa ee Soomaalida loo
· HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo ka soo horjeesday qodobadii ka soo baxay shirkii Garoowe.
· Shirkii Road mapka ee loo qabtay qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed.
· HS:-Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya
· HS:- Gudigii diyaarin lahaa doorashada gudoomiyaha baarlamanka Soamliya oo lagu dhawaaqay.
· HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Professor Warfaa oo ka hadlay shirka Garoowe
· HS:-Gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlamanka oo sharci ku tilmaamay xil ka qadistii lagu sameeyey Shariif Hasan
· HS:-Ciidamadii iyo horjoogayaashii kooxda Shabaab ee Mogdisho laga saaray oo dib ugu soo noqday.
· Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo soo gabogabeeyey inta badan shirarkii uu maalmahan u joogay
· Xildhibaan Madoobe Nuunoow oo shir gudoominaye ka aha shirkii ay iskugu yimaadeen mudanayasha baarlamaanka.
· Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Somaliya
· Maxaa sababa in lagu guuleysto inta badan mashaariicda ay gudaha Hiiraan ka fuliyaan qurba joogta reer Hiiraan?
· Maxaa ka jira in Shiikh Shariif beesha caalamka kul ataliyey in aan lagu deg degin go,aankii ay mudanayaashu ay xilka kak qadeen Shariif Hasan?
· HS:-Madoobe Nuunoow Mohamed oo lagu wado inu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka kadib markii
· Mudanayasha baarlamaanka, beesha caalamka iyo Shariif Hasan maxaa kala heysta.
· Wararkii ugu danbeyey qilaafka Shariif Hasan iyo mudanayaasha baarlamaanka.
· HS:-Mid ka mid ah shirar dhawr ah oo uu madaxweynah mustaqbalka Somaliya ku qabtay magaalada Washington DC oo.
· Shirkii Garoowe oo dib loo dhigay inta xal laga gaarayo qilaafka baarlamanka
· HS:-Gudoomiyihii hore ee barlamanka Sheekh Aadan Madoobe oo maanta Shir jaraa’id ku qabtay
· HS:-Gudoomiyaha kumel gaarka ah ee baarlamaanka oo si rasmi ah loogu dooranayo.
· Madaxweynaha mustaqbalka Professor Warfaa oo gaaray magaalada
· Wararkii ugu danbeeyey arimaha siyaasada Somaliya
· Madaxweyne Shariif oo sheegay in arinta Shariif Hasan ku dhacday lama filaan loosa baahanaa.
· HS:- Qorshe ay ku doonayeen mudanayaal taageersanaa xildhibaan Shariif Hasan oo fashilmay kadib
· HS:-Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
· Wararkii ugu danbeeyey xil ka qaadistii Shariif Hasan iyo shirkii Garoowe
· HS:- Diyaarado dagaal oo dul heehaabaya magaalada Belet weyn
· HS:-Ku dhawaad 300 oo ka tirsan mudanayaasha baaralamaanka oo kulan ku yeeshay Xarunta oo xilkii
· Shir muhiim ah oo ka dhacaya Darussalam Cultural Centre.
· War Deg Deg ah: Mudanayaasha baarlamaanka kumeel gaarka oo labo u kala jabay.
· Madaxweyne Shariif iyo safarkiisa Doha.
· HS:-Xildhibaan Waare oo noqday siyaasiga loogu hadal heynta badan yahay Hiiraan.
· HS:-Faah faahin ka soo baxeysa shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada London.
· HS:-Maamulka Puntland, Shariif Hasan iyo QM oo malaayiin dolar ku bixineysa sidii.
· HS:-Sawirada Isbuucaan iyo Hiiraan
· HS:-Xoghayaha guud ee QM oo Ban Ki Moon oo laga yabo inuu Mogdisho tago
· Qilaafkii maamul goboleedka Galmudug oo la xaliyey
· HS:-Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Ahmed Muumin Warfaa oo safar
· TFGda oo maamul goboleedka Puntland ugu deeqday qalab lagu dhiso wadooyinka iyo gawaarida xamuulka halka ay dagaal kula jiraan shacabka koofur iyo gobolada dhexe.
· HS:-Heesaha aad loo xiiseeyo ee Cabdi Diini
· Ciidamada Kenya oo qaadanaya magaca Amisom, halka magaalada Kismaayo
· HS:- Wararkii ugu danbeyey Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliaya Prof Warfaa
· Shirkada Dahabshiil xafiiskeeda Hiiraan oo ka qeyb qaatay dadaaalada jaamacada Hiiraan loogu iibinayo labo Bus.
· HS:- Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya:Mahiga Shirkii Garoowe dib ayu u dhacay Somalilana in la aqoonsado ayey u qalantaa.
· Gud baarlamaanka Shariif Hasan oo waayadii danbe iska dhaadhicyey in maamulka Puntland wax ka dhigi karo aya hada u muuqda mid ay ku dhagan yahiin mudanayaashii isag asoo doortay.
· HS:- Shirkii Al qacidada Somaliya uga socday magaalada Baydhabo oo lagu kala tagay kadib markii uu muran ka dhashay sida laga yeelayo.
· HS:-Qorshe la doonayey in lagu bur buriyo maamulka Galmudug oo u muuqda mid fashilmay.
· HS:- Xaalada uu dalku ku sugan yahay:Xog uruurin aanu ka soo diyaarinay qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed ayaa waxey jawaabtii noqotay.
· HS:-Masjid Quba Hayes A lecture by Shikh A'id Al-qarni Quba Islamic Centre.
· HS:-Maamulka iyo ardeyda jaamacada Hiiraan oo wajiyadooda laga dheehan garay farxad kadib.
· HS:- Dowlada Mareykanka oo qorsheyneysa iney ka mabnuucdo dalkeeda Xawaaladaha Somalida ka hor.
· HS:-Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya.
· HS:-Jaamacada Hiiraan oo lagu wado in loo iibiyo Bus weyn oo ardeyda ka qaada magaalda kadib markii uu ka duqoobay Buskii hore.
· HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo safar gaaban ku tagaya magaalooyinka
· HS:-Barnaamijkii ay TFGdu ugu magac dartay qorshe howleedka (Road Map oo ay ku jahwareersan yahiin.
· HS:-Shirarkii uu madaxweynaha mustaqbalka Somaliya ka waday UAE oo aad uga xogeystay sidi ay ku socdeen dhawr maalmood ka hor.
· HS:-Tirada baarlamanka kumeel gaarka oo la dhimayo iyo doorashadii ay bulshada Soamliyeed kaka baxayeen xiliga kumeel gaarka oo laga soo.
· HS-Ciidamo ka tirsanaa Ahalusuna oo reer Hiiran ahaa oo ka soo baxay Galgaduud.
· HS:-Faa'idooyinka laga dhaxlay tan iyo markii Jamaamacada Hiiraan laga hirgaliyey magaalada Belet Weyne
· HS:-Faa'idooyinka laga dhaxlay tan iy markii Jamaamacada Hiiraan Belet Weyne.
· HS:-Jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka oo lagu micneeyey labo arin
· HS:-Wararkii ugu danbeyey shirar isadaba jooga ah oo u ka wado m/weynaha mustaqbalka Somaliya UAE.
· Mudanayasha baarlamaanka oo waxbo kama jiraan ku tilaamay gudigii Roadmapka
· Kooxda Shabaab oo laga yaabo in laga dabciyoculeysyada kaka furan Hiiraan hadii ay iskudayan Ahalusuna iney Hiiran soogalan.
· Golaha wasiirada TFGda oo isku shaandheyn lagu sameeynayo iyo wasiirka qorsheynta oo ka mid ah
· HS:-Wasiirka warfaafinta HS Amb. Xooshow oo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka Hiiraan State.
· Wasiirka difaaca Somaliya oo sheegay in dagalka Shabaab l akaashanayan cidkasta.
· Waxgarad reer Hiiraan ah oo ka cudur daartay iney la kulmaan Shiikh Shariif xili uu dhawaantan booqasho ku tagay dalka Kenya.
· HS:-Musharraxa Madaxweynennimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Ahmed M. Warfaa
· Tacsi (Inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun)
· Gudi ay u xilsaartay dowlad goboleedka Hiiraan State sidii loo wacyi gelin lahaa bulshada hiiraan oo
· Dowlada Kenya oo labo ciidan oo kal amagac ah ka howl galineyso Somaliya arintaasioo laga dhameeyey Shiikh Shariif
· HS:- Kooxda Shabaab oo dad badan xabsiga u taxaabay degmada Maxaas kadib markii ay diideen
· Golaha wasiirada TFGda oo isku raacay in la dhiso gudi soo diyaariya doorashada soo socota kadib fashil ku dhacay qorshahii.
· HS:-Musharaxa Madaxweeynimada Somaliya Mudane Cali Cabdalla Guure oo Safar Gaaban
· Dowlada kenya oo waji cusub u yeeshey siyaasadii guud ee bariga Africa iyadoo mele iska dhigtay been beentii labda Shariif iyo Mahigaa
· R/wasaaraha Ingiriiska David Cameron: "TFGDa way fashilantay,
· Shiikh Shariif shaleyto shacabka gobolada dhexe manta Jubooyinkae
· Kooxda Shabaab iyo Al-qacidada Somaliya oo markasta awood aysan l.aheyn idaacadaha ka shegta
· Gudoomiyahii midowka maxkamadaha Islaamiga Hiiraan Cabdraxmaan Ibraahim Macowoo qorsheynaya inuu dalka Kenya
· HS:- Qaranka kubada Cagta Somaaliya ee aan heysan wax dal ah oo ka danbeeya ayaa maanta guul weyn ka soo hooyey ciyaar ay la yeesheen Ethopia
· Buulo-burde HS:- Ciidamadii ugu badnaa Shabaab oo ku geeriyooday qarax xoogan oo caawa
· Maxuu ku dhamaday shir dhawr saac qaatay oo ay doonayeen Gudoomiyaha baarlamanka iyo r/wasaaraha Somaliya iney kaka taqalusiyaan Shiikh Shariif
· Qorshe ay TFGdu ku dooneysay iney ka mabnuucdo Qaadka Kenya ka yimaada inta ay ciidamadeedu joogaa Somaliya oo ka fashilmay.
· Breaking News: Shirkada Xawaalada Amaana Express oo lag ayaabo iney musalafto kadib markii qaar ka mid ah hantiilayaasha shirkada go,aansadeen iney gooyni u sameystaan magac kale.
· Maxaad kala socotaa qaabka lagu dilo dadka hantidooda looga dhacay Mogdisho sida gur iyo wax la mid ah.
· HS:-:- Hasan Turki iyo ciidamo badan ooka soo jeeda Shabaabka Jubooyinka oo qorsheynaya iney nabad ku bedeshaan colaada kadib markii ay arkeen hadalada qabiilka ee ay mujaahidnta ku kala
· wakiilka Hiiraan State ee Uk oo ay si weyn u so dhaweeyeen jaliyada Hiiraan ee Uk kadib.
· Maxaad kala socotaa faraqa u dhaxeeya dagalka Mogdisho ay kawadaan Amisom iyo midka ciidamda Kenya iyo.
· Wararkii ugu danbeyey shirar is daba joog ah oo uu ka wado magaalada Dubai m/weynaha mustaqbalka Soamliya Prof Warfaa.
· Wararkii ugu danbeyey Somaliya.qaabka xilka looga qaadayo R/wasaare Gaas iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan Shabaab oo ky geeriyooday Jubooyinka.
· Labo ka mid ah shirar isdabajoog ah oo xilka looga qaadayo R/wasaaraha Somaliya oo Mogdisho lagu soo gabo gabeeyey.
· Breaking News:- M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo saacad ka hor gaaray magaalda Dubai.
· Hubkii ugu badnaa ee ay dowlada Erteria u soo dirto Shabaab oo ku soo wajahan Baydhabo.
· HS:-Dagaal ka dhacay Beergadiid, Takaraale ilaa Bacda oo siweyn loogu jabiyey tiro ayr oo Shabaab ka tirsaneyd oo goobtaasi dagaal ku qaatay.
· CURRICULUM VITAE OF SOMALI'S NEXT PRESIDENT AHMED MUUMIN WARFAA.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa oo shacabka Somaliyeed ugu hambalyeeyey Ciida xili uu maanta ka dhoofay dalka Mareykanka.
· Dowlada Ugandha, Kenya iyo QM oo laga yaabo iney dhiirageliyaan sidii doorashada soo socota loogu qaban lahaa.
· Inta badan kalkaaliyayaasha Shiikh Shariif oo xililkooda iska casilayo kadib markii ay sheegeen ineysan la shqeyn karin.
· Tacsi (Inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun) Waxaa bulshada Hiiraan ka baxay caaqil Somaliyeed marna ahaa Ugaas siweyn looga qadarin jiray guud ahan Hiiraan Ugaaska beesha Gaaljecel Ugaas Cabdullaahi
· Fashilka siyaasadeed ee Shariifka maxaa xiga?
· Wakiilka Hiiraan State ee Uk oo dib ugu soo laabtay London.
· Saraakiil Alqacida iyo Shabaab ka tirsan oo ku geeriyooday degmada Jilib
· Ciidmadii Kenya lagu soo tababaray ee Azania oo hogaaminaya howl galayada jubooyinka iyo shacabka Somaliyeed oo....
· Dowlada Kenya oo ku mashquulsan sidii Shiikh Shariif meesha looga saari iyadoo ku guuleysatay iney ka dhaadhiciso Amisom amaba dowlada Ugandha.
· HS:- R/wasaare Gaas oo safar u aaday Kenya, Maxaase ka jira in Shiikh Shariif doonayo inuu Xilka wasiirka 1aad u magacaabo wasiirka Maaliyada TFGda?
· Dowlada Kenya oo duqeyn ba'an ka geysatay Tuulada Kudhaa.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Ahmed Muumin Warfaa
· Guud ahaan dalka Somaliya oo lagu diirsaday roobabkii Guga iyo meelaha qaarkood oo dhulku waxoogaa doog noqday
· HS:- Dowlada Tanzania oo si buuxda u taageertay howlgalada ay dowlda Kenya ka wado Somaliya iyadoo uu arintaan ku dhiirageliyey Mahiga.
· Fashilka siyaasadeed ee Shariif Shiikh Ahmed ma u horseedi doonaa wadanka in ay doorshao ka dhacdo si looga baxo xiliga kumeel gaarka?
· Beesha caalamka oo aad ula yaaban Shiikh Shariif oo ka hor yimid ciidmadii Kenya kuwa Ethiopiyana ka hadli la.
· Ciidamada Kenya iyo kuwa Azania oo magaalda Kismaayo u jira wax ka yar 50 KM.
· Dowlada Kenya oo ku gacan seyrtay wada hadal Shabaab codsadeen iyo jubooyinka oo ay si buuxda ula wareegayaan maamulka Azania
· Wararkii ugu danbeyey: R/wasaare C/wali oo booqasho rasmi ah ku imaanaya dalka Kenya halka Shariifka diiday iyo waliba xaalka Shabaab.
· Wararkii ugu danbeyey:Safiirka Somaliya ufadhiya kenya oo ka soo horjeestay hadalkii Shariifka.
· HS:-R/wasaaraha Somaliya C/Wali Gaas oo si buuxda u taageeray dowlada Kenya iyo dagaalka ay kula jirto Shabaab iyo Ajnabigooda
· Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca: Shiikh Shariif iyo Shabaab waa isku mabda
· Hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al Shabaab oo maanta lagu arkey xaafada wardhiigley.
· Ciidamada Amisom oo dal baday iney gooyni u dagalka u galaan kadib markii la xaqiijiyey in ciidmada TFgda ku jiraan ciidamo Shabaab taageersan oo Shariifka ka amar qaata.
· Codsiyo Shiikh Shariif u soo faray madaxweynaha Hiiraan State oo ay masuuliyiinta HS dhegaha ka fureysteen.
· Wararkii ugu danbeyey:Dowlada kenya oo laga yaabo iney joojiso duulimaadyada uga yimaada gudaha Soamliya iyo dadkii qurbaha ka tagy oo arintaas ka wal walsan hadii ay dhacdo
· Guddoomiyaha Maxkamadda Sare HS oo digniin u diray kooxaha aan cidna metelin ee ku qaraabanaya magaca Hiiraan.
· Banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Shiikh Shariif oo ka dhacay gobolada Jubooyinka.
· Breaking News:Shiikh Shariif oo la xaqiijiyey inuu gudaha dalka Soamliya ku heysto 700 ciidamo Shabaab ka tirsan oo isaga ka amar qaata.
· Xakuu ku danbeeyey qilaafkii Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta ee gudah aHiiraan looga yaqaano wasiirkii Road-Map?
· Shiikh Shariif oo dowlada Kenya uga digay iney degaanada Jybooyinka u qabtaan maamulka Azania kana codaday howsha u daayaan TFGda.
· Gobolada jubooyinka oo mudo 21 sano kedib qarka u saaran iney la wareegaan maamulka Azania iyo Prof Gaandi ??
· Gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan oo maanta ka yaabiyey Somali badan??
· Masuul u hadlay dowlada Kenya oo xaqiijiyey in aysan TFGda dooneyn in dalka laga saaro Shabaab
· Wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka Hiiraan state Amb.Hoshow oo ka hadalay xaflad lagu soo dhaweynayey m/weynaha Puntland
· Wararka ka imaanay dalka Turkiga ayaa sheegaya in wasiirka qorsheynta iyo Shiikh Sharii fhalkaasi midkast ala tagay report u gaar ah.
· Meydadka ciidamda Shabaab oo daadsan jubooyinka iyo Dayniile
· Dowlda Kenya oo sheegtay iney gacan bir ah ku qabaneyso taageerayaasha Shabaab iyo Al qacida ee dalkooda ku nool.
· Gobolada jubooyinka oo laga hirgalinayo nidaam uu hogaaminayo maamulka Azania iyadoio ay arintaas ogolaadeen Ahmed madoobe iyo inta badan ciidamda Hasan Turki
· Ganacsatada waaweyn ee reer Hiiraan oo aan ku milmin siyaasada halka kuwii hantida ku yeeshey dagaalada sokeeyey dhibaato ku hayan bulshada
· Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya iyo shirkii wadatashiga oo Garoowe laga weecinayo. sababtu maxey taahy?
· HS:- Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga TFGda oo saacadaha soo socda laga yaabo inuu iscasilo.
· Muwadin reer Hiiraan ah oo ka sheegeynaya qaabkii ay u xirteen shaqaalaha shirkada Xawaalada Amaan qeybteeda Nairobi sanadkii tagay.
· Wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya TFGda, Shabaab iyo Amaanka shacabka PUntland oo qatar ku jira.
· Shiikh Shariif oo dowlada Turkiga doonaya inuu kula heshiiyo siyaasado cusub si uu xiriirka ugu jaro wadamo ay ka mid yahiin America, Yurub iyo IGad oo ay Ethiopia uguhoreyso.
· Dadaalo ay wadaan QM iyo wadamada daneeya arimaha Soamliya ayaa laga yaabaa in waqtiga TFGda shaqseyneyso uu noqon doono 90 maalmood oo kaliya
· Shabaab oo qarka u saaran in ay iskaka baxaan J/hoose kedib cadaadis kaka yimid dhinac kasta.
· Wasiirka qorsheynta iyo ganacsato u ololeyneysay in Hiran jowhar lagu daro oo qilaaf xoogan soo kala dhaxgalay isagoo u baqoolay dalka Ethiopia
· Qilaaf bilaaw ah oo soo kala dhax galay masuuliyiinta Dowlada halka Shabaab awoodooda iskugu geeyeen Sh/Hoose.
· xurkuf cusub oo laga dareemayo hogaanka sare ee TFGda iyo Cwali Gaas iyo dhawr wasiir oo lag ayaabo in ay shaqadooda waayaan dhawaantan.
· Beeraleyda Hiiraan oo isku diyaarinaya sidii ay ugu faaideysan lahaayeen roobabaka ka curtay Hiiraan iyagoo dhib ku qabay isticmaalka matoorka oo aysan dadku badankood awoodin.
· Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaqaalahii loogu talo galay dadka barakacayaasha ku iibsaday guri uu leeyahay Cuamr Carte Qaalib gurigaasi oo ku kacay ku dhawaad 0ne Million
· Shir ay iskugu yimaadeen R/wasaarahii hore Farmaajo iyo koox siyaasad ahaan ka soo goday Shiikh Shariif oo uu kulan ku dhaxmaray dalka Taliyaaniga iyadoo lagu wado iney ku dhawaaqaan ururu siyaasadeed
· Xildhibaanada reer Hiiraan ugu jira baarlamaanka kumeel gaarka oo isku raacay in aan Hiiraan meelna lagu dari karin Hiiraane isku filan yahay ii noqon karo labo gobol.
· Wasiirka qorsheynta TFGda oo dalka Kenya ku sugan iyo waxgaradka reer Hiiraan oon haba yaraatee boqan
· Wasiirka Qorsheynta oo ka tanaasulay hamigiisii ahaa in Hiiraan iyo jowhar leysku daro kedib markii uu shir la yeeshey aqoonyahano reer Hiiraan ah.
· Shirkii wadatashiga ee Mogdisho iyo kan hada la abaabulayo ee Garoowe labaduba ujeedadoodu waa sidii dalka Somaliya qeyb ka mid ah loo iibin lahaa baarlamaanka hada jirane loo bur burin lahaa.
· Masuuliyiinta Bada Soamliya muranka kaliyey ee gatay aqoon ma u leeyahiin wadankasta qeybta uu xaq u yeelan karo tan iyo markii la xadeeyey Badaha Aduunka?.
· Wararkii ugu danbeeyey xaalada siyaasada dalka Somaliya, Shabaab.
· Cabashooyin horu dhac ah oo inooga yimid mid ka mid ah xafiisyada shirkada Amaana ee Yurub kedib markii ay sheegeen iney lumiyeen macaamiil badan.
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State Ambassador A.A. Hoshow oo ku tilmaamay Hiiraan oo Jowhar la midowda iney ka dhigan tahay Calaacal timo ka soo baxeen.
· Fashil ku yimid qorshahii ay Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta ku doonayeen iney qeyb ka tirsan Sh/dhexe iyo Hiiraan iskugu daraan
· Qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska shirkada Xawaalada AMaana ee magaalada Nairobi oo qeyb ka ah arinta qorshe Hiiran iyoSh/dhexe uu ku doonayo Shiikh Shariif
· Shiikh Shariif iyo wasiirka Qorsheynta C//aahi Godax Maxaa kala heysta labadooda waxey iska aragti ka yahiin in Hiiraan iyo Sh/dhexe leysku daro laakin waxey ku kala duwan yahiin qaabka
· C/wali Gaas oo taariikh aan horey loo arag ka sameeyey QM
· M/weynaha Hiiraan State Eng Mohamud Abdi Gaab oo soo gabo gabeeyey safarkii uu maalamahiku marayey wadamo bariga dhexe ka tirsan malintii shaleyto aheyd.
· Dhismahii Xarunta Cusub ee Agoontay Ugaas Khalif oo la bogay iyo xafladii magaalda Belet weyne lagu qabtay .
· Sidey u arkaan shacabka Hiiraan qorshaha ay reer Puntland horboodayaan ee dalka looga hirgalinayo 18kii gobol ee ay dowladii Kacaanka sameysay.
· Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay o ka dhacday dalka Kenya kedib markii lagu guuleystay dhismahii Agoonta Ugaas Khalif ee magaalda belet weyne.
· HS:- Waabaa baryayey bilicsan arooryo baxsan maalin boqran
· HS:-Wararkii ugu danbeeyey shirarka ay Mahiga iyo C/wali Gaas la leeyahiin jaaliyada Somaliyeed ee waqooyiga America,halkuuse ku danbeeyey afhayeenkii baarlamaanka ?
· Tuulada Mabaax oo laga hirgaliyey Ceel biyood ku filan dadka degaankaasi kunool kedib markii ay hdismahiisa iska kaashadeen dadka degaanka iyo jaaliyada Kenya oo ka jawaabay codsi uga yimid Ugaas Cabd
· Inaa Lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun: Waxaa magaalada Belet weyne ku geeriyooday Ala ha u naxariistee Hasan Rashiid Ugaas Rooble
· Dhawr wafti oo ka kala socda TFGda ayna kala hogaaminayaan C/wali Gaas,Shariif Hasan iyo shaqsiyaad ka socda Shiikh Shariif oo xarunta QM wada gaaray. maxey tahay sababta?
· Qeybtii labaad magaalada Bulo Burde sawiradani waa Old Buulaay oo iyadane siweyn loo dhisay walow meelaha la dhisay ay yahiin meelahii sida gaarka ah loo lahaa.
· Shacabka Hiiraan oo shaqooyinka ugu badan ka hela guryaha ay qurba joogta reer Hiiraan ka dhistaan Magaalooyinka waaweyn.
· Heshiisyadan reer Mudug kala saxiixanayaan dalka intiise kale maxaa u diiday oo maamulada kale loola dagaalayaa?
· Shacabka ku nool gobolada Somalida oo ay ugu horeeyaan gobolada dhexe oo macaluul u dhimanaya iyo magalada Mogdisho oo guryahay Vilooyinka ah lagu geydsado cuntadii uu aduunyada soo diray umada Som
· Buuntada Bulo Burte oo qarka u saaran iney godo kedib markii biyaha wabiga ay dhinac kasta ka qodeen gudahane ka duqowday.
· Dalka Somaliya oo mudo 21 sano ah kedib laga tir tirayo dowaldahii kumeel gaarka ahaa ee sida sahlan loo ceyrin jiray hogaamiyaashooda iyagoo aysanjirin wax ay galabsadeen.
· Aqoonyahanadii, waxgaradkii iyo qaabkii lagu dhisay dowlad goboleedka Hiiraan State of Somalia.
· Aqoonyahano reer Hiiraan ah oo qiray in isticmaalka dekeda Bosaaso ay aad uga haboon tahay dekeda Mareeg mustaqbalka si loo daboolo 3.1 Million shacab ah oo ku nool inta u dhaxeysa Jigjiga ilaa xeebta
· Shirkii wadatashiga oo soo gabo gaboobay iyadoon war murtiyeen laga soo saarin taasi oo muujineysa inuu fashil ku dhamaaday.
· Gudomiyaha golaha dhaqanka Hiiraan nabadoon Xooshow oo sheegay in aysan waxii ka soo baxay shirkii loogu magac daray wadatashiga uusan quseyn reer Hiiraan.
· Wararkii ugu danbeeyey shirka wadatashiga iyo qorshaha labada Shariif iyo Mahiga.
· War saxaafadeed uu m/weynaha Hiiraan State ka so saray shirka wadatashiga.
· Qeybaha kala duwan ee bulshada Soamliyeed oo nabad ugu baaqay walaalaha uu dagaalku ku dhaxmaray magaalada Galkacyo.
· Fu,aad Shanqoole oo sheegay in Shabaab ay qaladaad badan ka galen shacabka Somaliyee oo ay xalaaleysteen dhiigooda iyadoo uu hadalkan cusub uu burinayo mid uu horey u jeediyey.d
· Shirkii wadatasgiga oo aan rajo badan laga qabin iney ka soo baxaan wax dadka iyo dalka anfacayo kedib markii la xaqiijiyeye in ajandaha shirka ay la wareegayaan UN-ka.
· Dagaal laga cabsi qabo inuu mar kale ka qarxo Galkacyo kedib markii beelaha qaarkood shacbakooda si hoose ugu wargeliyeen iney magaalada ka baxaan.
· QM oo mar kale ku baaqday in la gaargaaro shacbaka Soamliyeed iyadoo ay abaarahi ku fideen dalka intiisa kale amaba gobolo kale.
· Maxaad kala socotaa shir dhawaantan dhax maray Shiikh Shariif iyo xildhibaanada iyo wasiirka beesha Xawaadle shirkaasi oo uu cadsaday Shiikh Shariif.
· Madaxweynaha Hiiraan State oo baaq nabadeed u diray dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad fara badan.
· Wafti ka socda dowlad goboleedka Hiiraan State oo dhawaan ku wajahan gudaha si ay u diyaariyaan goobo xarumo lagu quudiyo shacabka ay abaaruhu ku dhufteen kedib.
· Wararkii ugu danbeeyey shirka wadatashiga, xasuuqa shacabka ay kuhayaan ururkii dhawrka koox u kala jabay ee Shabaab iyo abaaraha.
· Tacsi (Inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun)Bahda HS.com waxey tacsi tiiraanyo leh u dirayaan suxufiga caanka ah Xasan Karatee oo hooyadii ku geeriyootay magaalada Qabridahare dhawaantan.
· M/weynaha dowlad goboleedka Hiiraan State Eng. Mohamud Abdi Gaab oo hambalyo i diray shacabka Hiiraan iyo Somaliweyn.
· Taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Hiiraan State Sareeya guuto Baryare Nuur Maalin iyo wafti uu hogaminayo oo gaaray gudaha Hiiraan.
· Safarkii Shariifka ku tagay Puntland iyo siyaasada maanta.
· Guul u soo hoyatay shacabka Hiiraan keidb markii 90% xaruntii agoonta Ugaas Khalif la dhameeyey lana xaqiijiyey iney caruurtu ku ciidi doonaan maalinta ciida Insha alaah.
· Puntland oo ay ku sii qulqulayaan dhalinyaro bistoolado wata.
· Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Somaliya, Shabaab, Ahalusuna, Mahiga, labada Shariif.
· Idaacada Radio Mogdisho oo ku guuleysatay iney kasbato dhageysiga inta badan Shacabka Somaliyeed waxii ka danbeeyey safarkii R/wasaaraha Turkiga, maxey tahay sababta?
· Somaliya oo lagu wado iney doorasho nadiif ah ka dhacdo iyadoo inta aan la gaarin la bedelayo Amb. Mahiga.
· Ninka sheegta inuu wakiil uga yahay Hiiraan Ahalusuna Aden Cawaale oo shirkii Caabuud waaq dhulka lagu jiiday wafti ka socday isaga.
· Mucaawinada shacabka masaakiinta ah loo wado oo la xaqiijiyey iney dhacaan ciidamo ka amar qaata Yuusf Indha Cade oo ah hogaamiye kooxeedka kaliya ee Mogdisho ku heysta 20 tiknikada dagalka.
· Gudoomiye ku xigeenka barlamanka Kenya Faarax Macalin Dawaari oo booqday Dhooblay
· Shacabka Hiiraan oo ay dhibaato ka soo gaartay abaarahii halka aduunyadu u aragto Mogdisho oo kaliya goob ay ka jirto abaarta.
· Wararkii ugu danbeeyey dagaal Hiiraan ku dhax maray kooxo Shabaab ka wada tirsan.
· War deg deg ah: Dr Yusuf Hasan Abdi oo ka socday xisbiga talada Kenya haya ayaa ku guuleystay doorashadii Kamukunji
· Wadamo badan oo hakad gelinaya macaawino ay u soo diri lahaayeen Somaliya kedib markii suuqyada Mogdisho lagu iibsaday cunto loogu talo galay shacabka Soamliyeed.
· XEER JAJAB QARAN MA DHISO EE WAA DUMIYAA
· Maxaad ka taqaan qaabka uu shacabka koofurta Somaliya u xasuuqo hogaamiyahii ururka Shabaab oo hada hogaaminaya garab Shabaab ka tirsan Ahmed Godane?
· Shirkii loogu magac daray wadatashiga oo laga yaabo inuu dib u dhaco mudo aan la shaacin kedib markii la xaqiijiyey ineysan Somalidu u dhameyn.
· Xarunta agoonta Ugaas Kahlif ee Belet weyne oo laga yaabo iney ku ciidaan agoonta dhamaadka bishani aynu ku jirno.
· Wararkii ugu danbeeyey Shabaab iyo shir la sheegay in loo qabanayo Soamlida looguna magac daray wadatashi(Mahiga)..
· Abuu Mansuur Roobow Ali ayaa ka war bixiyey qaabkii ay u fashilmeen Shabaab kuna soo koobay 3 qodob oo kaliya.
· Doorashadii degaanka kamukunji oo la qabanayo 18ka bishan August ee aanu ku jirno.
· Shirkii ay QM qaban qaabineysay ee wadatashiga oo laga yaabo inuu dib u dhaco amaba fashilmo.
· Xaruntii Agoonta Ugaas Khalif ee magaalda Belet weyn oo qarka u saaran gabo gabo , halka farxad laga dareemayo caruurta wajiyadooda.
· Wararkii ugu danbeeyey Shabaab iyo Mogdisho.
· Qorshe dharka ciidamada dowlada loogu qeybinayo maleeshiyo beeleed horey uga tirsanaa ururkii bur buray ee Xizbul ISlaam iyo Shabaab oo ka socda xaafado ku yaala Mogdisho.
· Sargaal ka tirsan ururka Shabaab oo kashifay sir badan oo uu kaka hadlayey qaabkii ay Mogdisho ugu baxeen.
· War deg deg ah: qabqablayaashii dagaalka oo dib ula waregayo xarumahii ay horey ugu sugnaan jireen kedib.
· Qaar ka tisan Shabaabka Hiiraan oo lagu wado iney wada hadal la furaan saraakiisha ciidamda reer Hiiraan kedib fashil ku yimid uruka guud.
· Wararkii ugu danbeeyey siyaasada Somaliya keidb markii garab ka mid ah Shabaab iyo mid ka mid ah masuuliyiinta Mogdisho heshiis hoose galeen.
· War saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha Hiiraan State kuna socda taageerayaasha HS.
· M/weynaha Hiiraan State oo hambalyo u diraya shacabka iyo dowlad goboleedka Puntland
· Xaflado loogu dabaal degayo sanad guuradii 133 ee ka soo wareegtay aas aaskii Puntland oo ruxay dal iy dibad.
· Saraakiil uu ku jiro Hasan Daahir Aweys oo laga yaabo in gantaal lala eegto marka la eego dhaqdhaqaaqiisa sida loola socdo.
· Walaalaha muslimiinta ah oo la farayo iney ka faa'ideytaan waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan.
· Shirkii Maamul goboleedka Azaniya oo la soo gabo gabeeyey
· Tix gabay ah oo loogu jawaabayey Gen.Subxaanyo iyo beesha uu ka soo jeedo kedib markii uu aflagaadeeyey reer Hiiraan
· Shabaabka ku sugan Hiiraan iyo Sh/dhexe kuwooda ka soo jeeda degaanada Bay iyo Bakool ayaa loogu baaqay iney dib ugu laabtaan degaanadooda.
· Daawo Videowgan nin sheegaty inuu yahay la taliyaha Shiikh Shariif sida uu u hadlayo (Qaran iyo qabiil maxaa kala heysta)
· Qeybtii labaad shirkii London ee loogu magacdaray shirweynahii qurbo joogta reer Hiiraan.
· Shirweyne ay iskugu yimaadeen qurba joogta reer Hiiraan oo ka dhacay magalda London oo aan looga soo qeyb galin sidii la rabay kedib.
· Shirkii ugu balaarnaa oo ay qabtaan maamul goboleedka Azaaniya oo ka dhacay Limuru,KEnya
· War deg deg ah:Hogaamiyahii Shabaabka Hiiraan Yusuf Ali Ugaas oo xilkii laga qaaday iyadoo loo magacaabay wiil.
· Dalka Bosniya xiligii uu dagaalka ka socday waa laga hortagay in shacabku ay wadankooda ka baxaan laakinse Somaliya yaa u maqan.
· Maamulka degmada Ceelwaaq oo sheegay inuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Azaniya
· M/weynaha Hiiraan State oo arimo badan uga warbixiyey mar uu la hadlayey jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha.
· Hasan Daahir Aweys oo maalmahani ku sugnaa qeybo ka tirsan Hiiraan iyo qorshahiisa cusub.
· Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ururka Shabaab ay u shaqeeyaan qaab qabiil oo aad cajiib u ah halka Hasan Daahir Aweys lagu sheegay inuu hogaamiyo dagaalyahanada ka dagaalama Hiiraan.
· Xaruntii dhismaha agoonta Ugaas Khalif ee belet weyn oo gabo gabo ku dhaw iyo codsi ku.
· Afhayeenka jaaliyada beesha Xawaadle ee Minnesota Mustaf Sabriye oo soo dhaweyey Mudane Cabdullaahi Godax xilka loo magacaabay.
· Maxaad kala socotaa dhaqaalaha uu shaqsi reer Hiiraan ah ku bixiyey inuu noqdo oo kaliya wasiir?
· Mareykanka iyo Yurub oo sheegay ineysan Soamliya ka jirin wax dowlad ah oo ay fashilantay dowladii kumeel gaarka aheyd.
· Wararkii ugu danbeeyey siyaasada labada Shariif iyo wasiiradii qurbaha ka tagay.
· Ogeysiis Shirka Somalida UK 2011 xiliga la qaban doono iyo magaalooyinka lagu qaban doono.
· Shabaabka ku sugan gobolada dhexe oo bilaabay iney hubkooda iska iibiyaan, maxey tahay sababta?
· HS:- Xaflad Lagu taageerayey Madaxweynaha Jubaland Bare Hiiraale
· Xog uruurin aanu ka soo diyaariney shacabka Somaliyeed kedib markii ay South Sudan ka goday wadanka intiisa kale.
· Madaxweynaha Hiiraan State iyo wafigii uu hogamineyey oo booqasho ku tagay qeybaha kala duwan ee magaalada Boosaaso.
· Shacabka Somaliyeed oo wadanka si cilmiyeysan looga rarayo iyadoo xeryo qaxooti looga sameynayo Kenya iyo Ethiopia.
· Madaxweynaha Hiiraan State iyo wafti uu hogaaminayey oo maanta ka degay Puntland
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey shir lagu qabanayo magaalda London kaasi oo lagu dhisayo urur samafal ah oo la yiraahdo HM Mideeye Relief.
· Qaramada midoobay iyo ururka Shabaab oo ka wada hadlayo dhawaantaan qaabka Somaliya loo keeni karo gargaar
· Xildhibaanada baarlamaanka oo maalinta berito ah shacabkoodii oo sidan u dhimanayo laga yaabo iney ansaxiyaan heshiiskii Kampala.
· Shirkii Kampala ee meel uga dhacay qaraminada Somaliya oolag ayaabo in maalinta berito ah laga ansaxiyo mudanayaasha baarlamaanka iyadoo sida la sheegay lagu bixinayo qarash dhan half Million Dolar.
· Maamul goboledka Azaniya State of Somaliya oo shir labo maalmood socday ug usoo gabo gabeeyey waxgarad dalkaasi Kenya
· Maxuu kusoo dhamaaday shir ay maanta waxgaradka,aqoonyahanada,culimada beesha Xawaadle ku yeehseen magaalda Lodon?
· M/weynaha Hiiraan State oo ka codsaday jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha iney gargaar la soo gaaraan walaalahooda ay ku dhiban dalka.
· Dalka Somaliya oo ay si rasmi ah uga luntay hanaankii dowladnimo.
· Shabaabka Somaliya ayaa la sheegay inysan isku gurman garin hadii mar dagaal ka qarxo gobolada dhexe amaba Mogdisho kedib markii ay hoobteen dagaal dhawaantan ka dhacay Mogdisho, Gedo iyo Belet Weyn.
· Waxgarad reer Hiiraan ah oo ka digay shir la sheegay inuu ka dhacayo London iyo fariin ay u direen C/qadir Xaaji Masale.
· Mudo 60 sano ah kedib abaartii ugu xumeyd oo ku dhufatay wadamada Bariga Africa oo ay Somaliya ugu horeyso.
· xakee marayaa shir la sheegay in loogu qabanayo London reer Hiiraan, ayna abaaabulayeen C/qadir Xaaji Masale iyo Yusuf Garaad
· Mudane ka tirsan baarlamaanka Somaliya ayaa xilkiisa iska casilay halka kuwo kalena lagu wado iney iscasili doonaan.
· Maxaad kala socotaa shir la sheegay in uu ka dhacayo London aysan iskugu imaanyaan sida la sheegay reer Hiiraan.
· Doowo Videowgaan kedibna isweydii in ciidankani yahay ciidan qaran oo dalka iyo dadka Somaliyeed bad baadin kara marka meesha laga saaro Shabaab.
· Maxaad kala socotaa waxii ka danbeeyey shirkii Kampala dhaawaca ay dalka iyo dadka Somaliyeed u geysteen labada Shariif?
· Tartan gubada cagta ah oo ay iskaka horyimaadeen 4 kooxood oo ay qaatay koox ka socotay Hiiraan State.
· Wararkii ugu danbeeyey Shabaabka iyo ajaanibta Hiiraan ku sugan.
· Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khalif iyo maamulka xarunta Agoonta Ugaas Khalif ee magaalda belet oo rajo ka muujiyey dhismaha xarunta.
· Yaa sabab u ahaa in maanta dalka Somaliya loo gacan galiyomadaxweyne African ah ma SSDF,SNM,USC ama Labada Shariif?
· Madaxweynaha cusub ee Somaliya daawo sidauu shacabkiisa ula dhaqmayo
· Maamul goboleedka Azania State of Somalia oo siweyn looga soo dhaweyey gobolada Jubooyinka kedib markii ay kasbadeen shacbaka deganadaasi.
· Saraakiishii Shabaab ka tirsaneyd ee ka soo jeeday Puntland oo Shabaab iska baxay kedib .
· Shabaabka Hiiraan oo naf la caari ah. wararka maanta.
· Shirarkii loogu dabaaldegayey maalinta xornimada Soamliya oo intooda badan la kansalay kedib markii shaki la geliyey xornimada Somaliya.
· Yaa iska leh masuuliyada ay dalka SOmaliya dhawaantan kaka howl galyaan diyaaradaha aan cidina wadin?
· Culimaa'udiin Somaliyeed oo Shaki galiyey caqiidada madaxweynahii hore ee Somaliya waxii ka horeyey shirkii Kampala Shiikh Shariif
· Qore cusub oo ay iska kaashanayaan Hasan D Aweys, Abu MAnsuur, Hasan Yacquub iyo Ali dheere laguna dabargooynayo hogaamiyaasha Ajnabiga iyo saraakiisha Shabab ee ka soo jeeda gobolada waqooyi oo meel
· Somaliya oo ay doorasho ka dhaceyso waxii ka danbeeya bisha 8aad
· Qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed oo ciidamadooda kala baxayo TFGda , maxey tahay sababta.
· Kedib dagaalkii dhawaantan ka dhacay Hiiraan maalmo dhaweyd ayaa waxaa walito meelaha qaarkood laga helayaameydadka ciidamadii halkaasi looga dilay argagixisada Shabaab iyo xulufadooda.
· Qodobadii Kampala oo aysan baarlamaanka ka doodin ayaa lagu dhawaaqay R/wasaare maqaarsaar ah.
· Madaxweynahii hore ee Somaliya waxii ka horeyey shirkii loogu magac daray Kampala Acord Shariif Shiikh Ahmed iyo shacabkii Somaliyeed oo kala tagay.
· Tacsi:-Cadar Faaxah Indhooy oo ku geeriyootay Mogdisho.
· Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaaraya Villa Ugandha, Faroole oo caawa la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka si R/wasaare maqaarsaar ah loogu doorto C/wali.
· R/wasaarahii hore ee shacabka Somaliyeed mesha cidlada ah kaka dhaqaaqay Farmaajo oo lagu wado inuu noqdo la taliyaha R/wasaaraha sida lag asoo xigtay dad ka ag dhaw madaxweynaha maqaarsaarka ah ee So
· Somaliya oo tobanka sano ee soo socta loo sameynayo labo dowladood oo kumeel gaar ah oo min 5 sano shaqeyn doonta.
· wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya loolanka R/wasaraha cusub, mustaqbalka labada Shariif iyo Doorashada lagu wado iney wadanka ka dhacdo qaabka ay u dhaceyso.
· Jaamacada Hiiraan oo si habsami leh ay howlahooda u socdaan kedib dadaal badan oo sanado qaatay oo lag asoo maray.
· In waqti lagu lumiyo 550 xildhibaan waxaa ka sahlan gudoomiyahooda oo si toos ah loola macaamilo, tasina waxey shacabka Somaliya dhaxalsiisay gumysi ay dad yari fahmi karaan.
· Maxaad ka taqaanaa R/wasaaraha lagu bedelayo Farmaajo iyo mudada uu xlka R/wasaarenimo heyndoono halkeese ku nool yahay hada.
· Jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha xildhibaanada ku sugan Hiiraan iyo saraakiisha oo wada hadlay.
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State Amb. Xooshow oo soo dhaweyey iscasilaadii Farmaajo labada Shariifna kul ataliyey iney xooga saaraan sidii wadanka looga saari lahaa xiliga kumeel gaarka.
· Wararkii ugu danbeeyey qaabkii uu isku casilay Farmaajo,siyaasada labada Shariif iyo Somaliya oo shirwadatashi ah oo loo iclaamin doono.
· Magaalada Toronto oo uu si rasmi ah uga furmay shirkii lagu soo dhaweynayey musharaxa madaxweynaha Somaliya Ali Abdulle Guure
· Xaalada guud ee Hiiraan iyo heerka abaabulka dagaalka ay wadaan ciidamada xoogaga reer Hiiraan.
· Musharaxa madaxweynimada Somaliya Fanaanka weyn Ali Abdulle Guure oo maalinta berito ah kula kulmaya jaaliyada Soamliyeed ee Toronto Hotel Holiday Inn.
· Kacdonada looga soo horjeedo shirkii Kampala oo lag ayaabo inuu wajikale yeesho oo ay shacabku dalbadaan in wadanka doorasho laga qabto si looga baxo xiliga kumeel gaarka
· R/wasaare Farmaajo oo u muuqda mid siyaasada arimaha diabda kaka guuleysanaya labada Shariif iyo xulufadooda.
· Wararkii ugu danbeyey dagalada u dhaxeeya xoogaga reer Hiiraan iyo Shabaab ee ka socda qeybo ka tirsan Hiiraan.
· Shabaabka Hiiraan ku sugan oo jab xoogan ay u geesteen mujaahidiinta reer Hiiraan ee xornimo u dirirka ah.
· Wararkii ugu danbeeyey Somaliya maxaadse kala socotaa xaalada siyaasadeed ee labada Shariif waxii ka danbeeyey shirkii Kampala?
· Musharaxa madaxweynimada Somaliya Prof Warfaa oo ku taliyey in doorasho la qabto xili uu wareysi gaaban siiyey idaacadaweyn ee Radio Ogaal
· Maxaad kala socotaa qaabka R/wasaaraha Somaliya dalka looga saarayo.
· Go,aanadii shirkii Kampala oo fashilmay intiisa badan
· Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xilka looga qaadayo Moh'd Dheere
· Mudaharaadyo mar kale gilgily Mogdisho laguna taageerayo R/wasaaraha Somaliya.
· WAR DEG DEG AH:Gudomiyaha baarlamaanka oo Addis Ababa ka degay, iyo m/weynaha Ugandha oo 10 maalomood u qabtay inuu xilka ka tago Farmaajo.
· Wararkii ugu danbeeyey arimaha Somaliya.
· Shacabka Somaliyeed, ciidamada Qaranka, qurbo joogta iyowaliba qeyb ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Somaliya ayaa sitood ah ula saftay R/wasaaraha Somaliya kedib.
· Madaxweynaha Somaliya oo saacadahii ugu danbeyey bilaabay olole uu kaka dhaadhicinayo qaar wasiirada xukumada ka tirsan ay isku casilayaan si aduunyada loo tusiyo Farmaajo.
· Golaha wasiirada oo ka soo horjeestay heshiiskii Kampala
· Shabaabka Hiiraan oo lagasifeeyey dhulka miyiga ah iyagoo ku soo aruuray magaalooyinka Bulo Burte iyo Beletweyn
· Ololahii muharaxiinta u tartameysa hogaanka ugu sareeya oo si xowli ah ku socda iyo musharaxa Ali Abdulle Guure oo Canada soo gaaray.
· Musharaxa madaxweynaha Somaliya Prof Warfaa oo laba jibaaraya ololahiisii doorashada kuna sii jeeda New York, Yurub uguna sii gudbaya Bariga dhexe kedibna Africa dhawantan
· War Deg deg ah:- Dowlada Mareykanka oo ka fiirsaneysa waxii ka soo baxay Kampala iyadoona taageertay dibadbaxyada shacabka.
· Wasiirkii 7aad ee dowlada Shariif ka tiran oo la dilo
· Qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed oo ka cararaya taariikh xumo oo xildhibaanda dowlada ugu jira ku canaantay iney iscasilaan amab ogolaadaan iney wadanka doorasho ka dhacdo.
· War deg deg ah mudanayaasha baarlamaanka Somaliya oo ku biiray kacdoonka shacabka
· Dr Afyare Abdi Cilmi oo horey ula dhacsanaa saaxibna ula ahaa madaxweynaha Somaliya ayaa aad ula yaabay kana hadlay heshiiska Kampala iyo sida ay qatar u galiyeen wadanka labada Shariif
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo labada Shariif kul ataliyey iney iscasilaan.
· Banaanbaxyo gilgilay caasimada Somaliya, yaase guulsyan dona madaxweynah Ugandha iyo shacbaka Soamliyeed o difaacay R/wasaarahooda.
· Idaacada Shabelle oo dooneysa iney Mogdisho ka gado siyaasadaha labada Sahriif iyo madaxweynah Ugandha
· War deg deg ah: R/wasaarahaha Somaliya oo taageeradii ugu badneyd ka helay shacabka Somaliyeed halka saacadaa soo socoda lagu wado iney si toos ah ula saftaan mudanayaasha baarlamaanka Somaliya.
· wararkii ugu danbeyey qaabkii R/wasaare Farmaajo u qiyaaneen qaar ka tirsan golahiisa wasiirada.
· Tacsi Heer Qaran ah oo loo dirayo ehelada Ugaas Cuamr Ugaas Xirsi
· R/wasaare Farmaajo oo ay qayaameen wasiiradii uu u dirsaday Kampala oo heshiis la galay labada Shariif
· Wararkii ugu danbeeyey oogoos goos ah..
· Shirkii Kampala oo dhinac u dhacay iyo Farmaajo oo maalinta berito ah qasab isku casilayo.
· Wararkiii ugu danbeeyey Kampala
· Shabaabka Hiraan oo bilaabay iney bartilmaameed sadaan dadka waxgalka ah.
· Midowga Yurub oo bilaabay iney horumariyaan Soamliland iyo wafi halkaasi gaaray.
· Wararkii ugu danbeeyey shirka kampala
· War deg deg ah: QM oo diiday dhalalahii ku bixi laha shirka Muqdiso iyo shirkii oo baaqday.
· Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hiiraan State oo ka digay in xukumada hada jirta loo kordhoyo waqtiga isagoona sheegay in hadii ay taasi dhacdo Soamliya dib ugu laaban doonto dagaalo sokeeye.
· Madaxweynaha Somaliya oo gudoomiyaha baarlamaanka u soo bandhigay qorshe cusub iyo gudoomiyaha oo diidmo ka keenay.
· Wararkii ugu danbeeyey shirka kampala ee lagu dhax dhaxaadinayo Farmaajo iyo Sh Shariif ooisku dhinac ah iyo baarlamaanka Somaliya.
· Madaxweynahii hore ee Somaliya MudaneCabdulaahi Yusuf Ahmed oo magan galyo siyaasadeed ka helay wadanka isku tagaImaaraadka carabta.
· Xaflad ay ka qalin jabiyeen ardey badan o Somaliyeed oo ka dhacday magaalada St Paul ee gobolka Minnasota
· Dowlada Shiikh Shariif ma dowlad Somaliyeed baa mise waa maamul goboleed?
· Wararkii ugu danbeeyey shirkii Kampala, dagaalada Mogdisho iyo guud ahan xaalada Hiiraan iyo Gedo iyo baarlamaanka Puntlnd oo kahor yimid in waqtiga loo kordhiyo TFGda.
· Baarlamaanka Somaliya oo dib u fiirinaya joogiyaanka ciidamda Uganda oo kaliya.
· Wakiilka QM oo sheegay in aysan jriin waqti kordhin loo sameynayo TFGda oo uu sheegay iney wax ka qaban weysay.
· Wasiirka Arimaha dibada oo qilaafka dowlada ku tilmaamay mid la haray amaba saameyn ku yeshey siyaasada guud ee dibada iyo gudaha
· Xildhibaan Gacmadheere oo sheegay inuu yahaya musharax u taagan xlka madaxweynaha Somaliya.
· Waftigii ay hogaaminayeen xildhibaanada reer Hiiraan oo kulamo kala duwan halkaasi kula leh saraakiisha ciidamada
· Doorashadii madaxweynaha iyo gudonka baarlamaanka oo laga soo hormarinayo waqtigii loogu talo galay.
· Tacsi Inaa Lilaahi wa'inaa ilaahi raajicuun
· Somaliya waa IIb Kooxda Qeylo Dhaan
· Doorashada madaxda sare wey dhaceysaa xitaa hadii ay mudada baarlamaanka ay badan tahay
· Dhacdo la yaab leh oo ay TFGdu ka wado qurbaha kuna saabsan shirak Mogdisho.
· Musharaxa madaxweynimada Somaliya oo maanta ka amba baxay Seattle
· Reer Koofur oo heestii labaad u qaadaya Somaliland
· Jaaliyada Somaliyeed ee Seattle oo habeenkii xlaeyto aha dhigay wacdaro ay ku soo dhawyenayeen musharaxa Prof warfaa
· Yusuf Indhacade oo dhaliilay madaxweyne Shariif halka ciidamadiina ay u kala jabeen maxkamadaha iyo ciidamadii hore ee dowladii.
· Ururka Shabaab oo siweyn ugu jabay dagaalada ayaa haa magaca laga bedelayaa.
· Madaxweynaha mustaqbalka Prof Warfaa oo ku sugan Seattle Washington.
· Dumarka beesha Xawaadle ee qurbaha o soo dhaweyey dadaalda lagu mideynayo ciidmada reer Hiiraan
· Puntland oo horey u marti galisay ciyaarahii gobolada dalka ma laga yaabaa iney shirweyne Somaliyeed marti galiso?
· Shirkadaha diyaaradaha ka howl gala Mogdihso oo ka qeyliyey hanaanka casriga ah ee ay u shaqeyso shirkada SKA
· Urur uga qeyb gala doorashada soo socota oo ay ku dhawaaqeen inta badan hogaamiyaashi midowgii maxkamadaha.
· Wararkii ugu danbeeyey Somaliya, waa shir noocee ah shirka lagu wado inuu ka dhaco Mogdisho?
· Shirkada Dahabshiil oo noqotay shirkada ugu wanagsan shirkadaha Somaliyeed ahna shirkad aduunyada ugu shaqeysa hab casri ah.
· Shir looga hadlayey wadamada bariga Africa si gaar ahne loga hadlay dalka Somaliya oo ka dhacay Washington.
· Dhismaha xarunta cusub ee agoonta Ugaas Khalif ee Beletweyn oo lagu wado in lagu guuleysto dhismaheeda.
· Xildhibaanadii reer Hiiraan ee maalmahan ku sugnaa Ethiopia oo gaaray Hiiraan
· Wararkii ugu danbeeyey shirkii Kenya iyo dagaalada Somaliya.
· Madaxweynaha Somaliya oo ka yaabiyey aduunyada kedib markii si cad loogu sheegay iney doorashii dhaceyso iskana iloobo waqti kordhin kale.
· Dadaalo lagu mideynayey ciidamda reer Hiiraan oo meel fiican maraya
· Wararkii ugu danbeeyey Somaliya iyo caalamka
· Puntland oo buundo jabtay ku dhistay mudo gaaban.
· Musharaxiinta u tartameysa hogaanka sare oo bilaabay ololahooda kdib markii la xaqiijiyey iney doorashadu dhaceyso waqtigii loogu talo galay.
· Madaxweynaha Somaliland oo shacabka uga mahadceliyey isku soo baxii weynaa ee indhaha beesha caalamka soo jiitay.
· Wafti uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka oo maanta ka dhoofay Mogdisho.
· Hanti kor u dhaafeysa 300 Million oo doalr loogu deeqay shacabka Somaliyeed oo isku dhiidhiib gashay.
· Waxaa durbaba bilaawday ololahii musharxiinta ay kula kulmayen jaliyadaha Somaliyeed waxana maanta shirweyn ku qabtay magaalada London musharxa al fanaan Cali Cabdulle Guure
· Warar goos goos ah: Shabaab, dowlada, xiliga doorashada
· Qeybtii 3aad ee shirkii jaaliyada Toronto iyo Prof Warfaa
· Jaaliyada Toronto oo si aan caadi aheyn u soo dhaweeyey Musharaxa Prof Warfaa.
· Reer Canada oo caawa wacdaro ka dhigay shir ay ku soo dhaweynayeen Prof Warfaa
· Wararkii ugu danbeeyey iyo safarkii Prof Waraa uu ku tagay magaalada Toronto
· Gudiga doorasha madaxtinimada soamliya howlaheena meel fiican ayey marayaan
· Inta badan dalka Somaliya oo ay ka da'een roob lagu diirsaday
· Gudiga dib u heshiisiinta TFGda oo sheegay iney wadaan dadaalo.
· Madaxweynaha Somaliland oo si habsami leh ku wada siyaasada Somaliland.
· Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo.
· Shacabka Somaliyeed oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey tartankii uu kaalinta labaad ka galay Amiin Caamir
· Beesha caalamka oo madaxweynaha Somaliya iyo xukumada Farmaajo ula dhaqmeysa sidii dowladii C/qaasim
· Madaxweynaha Somaliland oo fagaaraha Hargeysa ka jeediyey qudbadii qarniga 21aad
· Madaxweye Caalim: waa in doorashada la qabtaa watigeeda shacabkana niyada laga jabin.
· Maxaa ka soo baxay kulankii labada Shariif ee maanta?
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey dadaaalda nabada ay wadaan xildhibaanada reer Hiiraan.
· Garoomada ku yaala dalka Somaliya oo ay si weyn uga dhoofayaan ajaanibta wadanka ka dagaalanta xaasaskooda.
· Addis Ababa: Wakiilka Somaliya u fadhiya midowga Africa ayaa shaaca ka qaday in loo baahan yahay doorasho dhacda.
· Gudiga doorashooyinka oo ay u soo dhamaatay siminaarkii.
· Wakiilka Somaliya u fadhiya dowlada Ingiriiska oo sheegay ineysan taageeri doonin dowlada hadii qorshe la,aan waqtiga loo kordhiyo.
· Madaxweynaha Jabouti oo ciidamo Villada ku waardiyeeya Shiikh SHariif diraya.
· Afhayeenka baarlamanka oo sheegay iney doorashadii dhaceyso bisha 8aad ka hor.
· Jaaliyada Somaliyeed ee Toronto qeybttii labaad
· Jaalliyada Somaliyeed ee magaalada Toronto oo shirtay.
· Xildhibaan Xasan Abshir Faarax oo madaxweynaha Somaliya kul ataliyey inuu aqbalo doorasho wadanka ka dhacda.
· Farmaajo caro kala dul dhacay maamul goboleedyada kedib markii uu fashil ku dhawaaday qorshe gobol Gedo.
· Puntland oo lagu dilay 3 ka mid ah ciidamdii ururka Shabaab ee debka ku qabtay qabrigii Ugaas Khalif.
· Agoonta.Liiska magacyadii gurmadka deg degaa u diray xarunt agoonta.
· Tacsi.Inaa Lilaahi wa'inaa Ilaahiraajicuun. Nabadoon Muxumed Goodax oo maanta ku geeriyooday Minnasota.
· Qaramada midoobay doorashadu bisha 6aad waa iney dhacdaa.
· Musharaxa Madaxweynaha Mr Yaasiin Maaxioo meel ka dhac ku tilaamay xanibaadii mudanayasha baarlamanka.
· Imaam Mohamud Imaam Cuamr oo ku geeriyooday Kenya
· Wasiirka Warfaafinta Hiiraan State oo sheegay in loo baahanyahaya doorasho ka dhacda Somaliya.
· Xildhibaanad Caasho Ahmed Abdalla Farmaajo waji gabax ayuu QM kala soo kulmay.
· Dowlad goboleedka Puntland oo si weyn u soo dhaweysay go,aankii QM ee ahaa in doorashada la qabto ka hor bisha 8aad..
· Siyaasadii Somaliya oo hal mar isbedel ku dhacay kedib xanibaadii lagu sameyey mudaneyaal baarlamaan oo ka dhoofayey Mogdisho.
· Qaramada midoobay oo doorasho ineyka dhcdo dalka ku baaqay.
· United Nations TV
· Ciidamada Puntland oo la sheegayo iney qasaaro weyn u geeysteen Atem dagaal ka dhacay Galgala.
· Gudigii doorashada ee baarlamaanka oo dalka ka dhoofay.
· Doorashadu wey dhaceysaa ka hor bisha 8aad afhayeenka baarlamaanka Shariif Hasan
· Wararkii ugu danbeyey shirar maalmahani uga socday magaalada Dubai Prof Warfaa iyo wararkii ugu danbeyey.
· Dowlada Mareykanka oo dhaleeceysay xanibaadii lagu sameye mudanayaasha baarlamaanka .
· M/weynaha Somaliya oo Mogdisho ku diyaariyey maleeshiyaad toogasho ku dila cidii isaga ka hortimaada.
· Afhayeenka baarlamaanka Somaliya oo ka hadlay xanibaadii lagu sameeyey mudanayasha baarlamaanka.
· M/weynahii hore ee Somaliya Cabdulaahi Yusuf Ahmed oo ugu baaqay madaxweynaha Somaliya inuu is casilo.
· R/wasaare Farmaajo oo ka danbeeyey xariga Bare Hiiraale
· Madaxweyne Shariif oo maanta ceeb iyo waji gabax siyaasadeed kala kulmay mudanayaal laga celiyey garoonka.
· War deg deg ah: Gudigii doorashada oo uu is hor taag ku sameeyey madaxweynaha Somaliya ineyka dhoofaan Mogdisho.
· Gudigii doorashada ee baarlamaanka oo maantaka dhoofay Mogdisho.
· R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar A/rashiid oo sheegay in wadanka ay ka dhacdo doorasho si kumeel gaarka looga baxo.
· Dowlada Uganda oo ciidamo hor leh u soo direysa Somaliya si loo xaqiijiyo doorashada soo socota iney ku dhacdo si nabad ah.
· Muwaadin Somaliyeed oo warbixin dheer ka diyaariyey qaabka ay u shaqeeyaan websideyada Somaliya kuwoodii ugu horeyey.
· Musuq maasuq lagu eedeyey dowlada Federalka iyo baaritaano hoose oo socda.
· Qaramada midoobay, African Unionka iyo urur goboleedka IGAD oo isku raacay iney doorashadii dhici doonto waqtigii loogu talo galay.
· Ururka Alqacida oo laga yaabo iney u kala jabaan labo garab oo u muuqaal ek Carab iyo Cajab
· Wararkii ugu dabeeyey musharaxa maaxweynimada Somaliya Prof Warfaa oo ku sugan Dubai
· Qeybtii labaad ee dhismaha agoonta Ugaas Khalif ee Belet weyn oo la bilaabay.
· Ururka Al qacida oo qiray in la dilay hogaamiyahoodii OSaama Bin Laden
· Shariif Hasan oo Shiikh Sharif uga jawaabayo heestii hore
· M/weynaha Hiiraan State oo amaan u jeediyey jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha sidii ay u garab istaageen shacabkii ay ku dhufteen Abaaraba
· Halery Clinton oo ah wasiirka arimaha dibada Mareykanka oo ka naxday markii xabadii 1aad lagu dhuftay Osaama Bin Laden
· Madaxweynaha Somaliya oo dalka Sudan ku Sugan sababtu maxey tahay.
· Gudiga doorashooyinka baarlamaanka Somaliya oo sheegay iney diyaariyeen kaararkii musharaxiinta.
· M/weynaha mustaqbalka Prof Warfaa safar ku jooga Bariga dhexe
· Qudbadii madaxweynaha Mareykanka uu jeediyey kedib dilkii Osaama Bin Laden
· War deg deg ah: Hogaamiyaal ka tirsan Shabaab iyo tiro Ajaanib ah oo ku go'doonsan Gedo kedib markii ay ka dhamaatay risaastii.
· Mudanayaasha baarlamaanka iyo mudowga Yurub oo isku mowqif ka noqday arimaha doorashada soo socota.
· M/weynaha Somaliya howlgalkii lagu dilay Bin Laden waxuu ahaa mid barakeysan
· Culimaa'udiinka Ahalu suna Waljameeca oo ku baaqay iney ka qeyb qaadanayaan doorashada soo socota.
· Bin Laden Is Dead
· War deg deg ah:Hogaamiyahii Al Qacida Osaama Bin Ladan oo la dilay.
· Boqorka dalkaasi Kuwait iyo madaxweynaha Somaliland oo kulan wada yeeshay.
· War deg deg ah:midowga Yurub oo dhaqaalaha ka jaraya TFGda iyo Amisom.
· Bosaaso: Xildhibaan Kirk oo si nabad ah Bosaaso uga soo laabtay kulana la yeeshay masuuliyiinta Puntland.
· Xildhibaan Xaabsade: "Doorasho dhicimeyso anigu waxaan u arkaa inay tahay xukun jacaylkii Somalida biday dhibaatada maanta dalka iyo dadka heysta"
· Afhayeenka guddiga doorashooyinka soo socda oo madaxweynaha Somaliya weydiiyey sharciga u diidaya in gudoomiyaha barlamaanka.
· Beesha caalamka oo si la yaableh ula socota Xukumada Farmaajo.
· Gurmadkii ugu horeyey oo ay diraan dumar reer Hiiraan oo gaaray xarunta Agoonta U Khalif
· Wadamada Carabta oo Somaliland ku amaanay nabadgalyada ay shacabkeedu heystaan
· Xidhibaan Mowliid Macaane Farmaajo iyo wasiiradiisa ha joojiyaano go,aanda ay maalinkasta soo saaraan.
· Dagaalkii u dhaxeeyey Farmaajo iyo Shabaab ee gobolka Gedo oo waji kale yeeshay.
· Madaxweynaha Puntland Faroole oo ku biiray siyasiyinta baaqooda gaarsiiyey MPyada Somaliya.
· Maxaad kala socotaa qaabkii ay ururka Shabaab u jabiyeen Buundada Liiqliiqato una dhiseen.
· Madaxweynaha Hiiraan State oo noqday shaqsigii ugu dulqaadka badnaa ee shacabka Hiiraan Soo mara.
· Xildhibaanada baarlamaanka oo madaxweynaha Somaliya talo wax ku ool ah siiyey.
· War deg deg ah: R/wasaare Farmaajo oo xil ka qaadis ku sameynaya 4 wasiiro oo xukumadiisa ka tirsan
· Nolosha hal milyan oo Somali ah oo qarkj u saaran macluul
· Xildhibaanda baarlamaanka oo bilaabay ololaha musharaxii ay dooran lahaayeen bisha 8aad iyagoo bilaabay iney
· Maxaa ka jira in beelaha Hawiye ciidamdooda kala baxayaan TFGda hadii ay xukumada Farmaajo ku adkeysato iney diido doorashada soo socota?
· Dhaleeceynta loo jeedinayo xukumada Farmaajo oo iska soo daba dhaceyso.
· Al Fanaan Cali Abdulle Guure iyo madaxweyne Shiikh Shariif oo noqday.
· War Dehg Deg ah: Sharuudaha looga baahan yahay musharaxiinta oo qeyb ka mid ah soo gaartay shabakada HS.com
· Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka Somaliya
· M/weynaha Hiiraan State oo jaaliyadaha reer Hiiraan ka codsaday.
· Gudoomiyaha dhalinyarada reer Hiiraanka Yurub iyo America Osman Raage oo aanu wareysi la yelanay.
· Xildhibaanada baarlamaanka Soamliya oo wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeray xukumada Farmaajo
· Xukumada Farmaajo ma noqon sidey moodayeen shacabka Somaliyeed
· Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in shir dib u heshiisiineed loo qabto DKMG ah iyo Xarrakada Al-shabaab
· Ceelka ugu biyaha macaan goboalda dhexe ee Somaliya oo noqday Ceel Gaal.
· Xukumada Farmaajo oo aduunyada ka dhaadhicineysa in qilaafka ka jira ku ekyahaya labada Shariif
· Shacabka Somaliyeed oo ku jahwareersan waxa laga wado xiliga kala guurka.
· Musharaxa madaxweynenimo ee SOmalia Prof Warfaa oo si weyn loogu soo dhaweeyey Colorado
· Dalka Britin oo ay ku sii qulqulayan wafuud ka kala socota aduunyada si ay uga qeyb galaan.
· Qilaafka labada Shariif oo la xaqiijiyey iney galaafteen nolosha kumanaan Somali ah.
· Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Denver
· Maxaad ka taqaanaa qaabka ay argagxisada u nacsiiso shacabka Somaliyeed hanaanka dowladnimo.
· Madaxweyanaha Somaliya ee soo socda oo la saadalinayo inuu noqon doodo reer Hiiraan
· Ururka Shabaab oo bur bur qarka u saaran kedib markii la xakameeyey dhaqaalahii uga imaan jiray wadamada.
· Shir Casho sharaf aheyd oo loo sameyey gudoomiyaha dhalinyarada Osman Raage oo ka dhacay London.
· Madaxweynaha Somaliya oo isku soo taagay doorashada soo socota.
· Ginevra Cofe Columbus,Ohio
· Ururka Islaaxul Islaamiya oo maanta magaalda Mogdisho ku doortay gudoomiye cusub.
· Baarlamaanka Somaliya oo ka heshiisyey mugdigii ay ka muujiyeen shirkii Kenya.
· Wakiilka qaramada midoobay oo aad ula yaabay sida ay shacabka Somaliyeed ula safteen dowlada
· Shir looga hadlayey Shirkii Kenya oo ka dhacay Finland
· Shir lagu taageerayey dowlada federalka Somaliya oo London ka dhacay
· Maxaa ka jira in Isbitaal weyn laga hirgalinayo Hiiraan kedib dhismaha Xarunta agoonta Ugaas Khalif ?.
· Waxaa la joogaa xiligii aanu isku tashan laheyn R/wasaare Farmaajo oo jaaliyada dibada la hadlayey.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof warfaa oo beesha caalamka kula taliyey iney ilaaliyaan.
· Maxaa ka jira in xukumada Farmaajo hor tageyso mudanayasha baarlamaanka
· Doorashadii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka oo dhaceysa waqtigii loogu talo galay.
· Madaxweynaha Somaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyey dalka Tanzania
· Kooxda Qeylo dhaan oo wakiilka qaramada Midoobay dhaqanadiisa guracan heesu qaaday
· Hawada Somaliya inagaa maamuleyna maadama aanu nahay dal xor ah (Farmaajo)
· Amirka Qatar oo wareysi dhiancyo badan taabanay siiyey Idaacada CNNta
· Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya ee bedeli doona midka hada jira ma waxuuka imaan doonaa beelaha Digil/Mirle mise.
· Wararkii ugu danbeeyey Hiiraan iyo qaabkii uu ku bur buray ururkii Dooxada Wabi Shabeele
· Doorashada madaxweynaha,gudoomiyaha baarlamaanka iyo kuxigeenadooda waxey dhaceysaa bisha 8aad ka hor.
· Ganacsigii kala dhaxeyn jiray shacabka Hiiraan Mogdisho oo u wareegay Puntland iyo Somaliland.
· Maxaa ka jira in wasiiro TFgda ka socday oo doonayey in ay ka qeyb galaan shirka Kenya loo diiday maalintii shaleyto aheyd.
· Ururkii Dooxada Shabeele ee loaga dhawaaqay Hiiraan oo laga masaafuriyey Feer Feer
· War deg deg ah:Madaxweynaha Somaliya oo caawa u duulay Ethiopia
· Qaramada midoobay oo sheegtay in doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka la qabanayo bisha 8aad
· Shirka Kenya oo ay ku kala jabeen ururka siyaasadeed ee Ahaluuna?
· Madaxweynaah Somaliya iyo R/waasraha oo maanta kulamo kala duwan ku qabtay Mogdisho.
· Qodobada shirka Kenya oo aanu helnay.
· Dalka maanta hogaamiyayaashooda lagu tumanayo bal eek siduu ahaan jiray.
· Madaxweynaha Somaliya oo beesha caalamka si weyn ugu canaantay hadagdaamada ay ku hayaan dalka Somaliya
· Banaanbaxyo looga soo horjeedo shirka KEnay oo ruxay inta badan dalka Somalia
· Maxaa ka jira in wadamo badan ay diideen iney shirka Kenya ka qeyb galaan?
· TFGdu awood intee la eg ayey u leetahay iney shaqada ka joojiso wakiilka qaramada midoobay?
· Shir looga hadlayey sida ugu haboon ee looga qeyb qaadan karo dhismaha xarunta Agoonta oo ka dhacay Toronto
· Shirka Kenya oo qaban qaabadiisa laga dareenayo Nairobi.
· Maxaad kala socotaa shirka Mombasa ka dhacayo?
· Afhayeenka Hiiraan State oo ka hadlaya arimo badan.
· Xaruntii Agoonta Ugaas Khalif ee Belet
· Meelaha ay maamulada ka jiraan ayaanu kaka kalsoonahay halka ay TFGdu joogto.
· Dood wadaag looga hadlayey shirka Kenya oo lagu qabtay London
· Siyaasada TFGda oo meeshii ugu danbeysay mareysa iyo Mogdisho oo.
· Dadaalo xarun cusub loogu dhisayo Agoonta Ugaas Khalif oo ay dibada ka wadaan haweenka reer Hiiraan.
· Qodobada heshiiska SKA iyo dowlada federalka
· Qodobada heshiiska SKA iyo dowlada federalka.
· Dumarka Reer Hiiraan ee ku nool Magaala madaxda Addis-Ababa ee wadanka Ethiopia ayaa Shir.
· R/wasaare Farmaajo iyo qaar golahisa wasiirada ka tirsan maxaa kala heysta?
· Gudoomiyaha dhalinyarada reer Hiiraan ee qaarada Yurub iyo America oo walito ku guda jira kulamadii.
· Roobkii Guga oo ka curtay Hiiraan
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey shirka Kenya
· Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya oo shir jaraa'id ku qabtay Mogdisho.
· Gudigii doorashada mhogaanka dalka oo lagu dhawaaqay.
· Madaxweyanaha Hiiraan State oo jaaliyada reer Hiiraan ee Ethiopia u mahadceliyey
· Doorashadii madaxweyanaha Somaliya iyo gudomiyaha barlamaanka wey dhaceysaa July.
· Doorashadii madaxweynaha Somaliya iyo oo dhaceysa bisha July.
· Shir ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada reer Hiiraan oo lagu taageeray Hiiraan State
· Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Somaliya oo wal wal ka muujiyey awooda maamul goboleedyada Somaliya
· Wararkii ugu danbeyey madaxweynaah mustaqbalka Prof Warfaa iyo safarkiisii Africa.
· Shirweyne si wanaagsan looga soo shaqeeyey oo lagu taageerayey dowlad goboleedka Hiiraan State oo ka dhacay caasimada Ethiopia ee Adis Ababa.
· Baaralamaanka Somaliya noo maalmaha soo socda kala xaqiijin doona in Soamliya tahay wadan xor ah iyo in waxii la doono laga sameysan karo.
· Xukumada Farmaajo oo markii ugu horeysay si rasmi ah ugu biirtay qalalaasahii ay wadanka ka bilaabeen ururkii USC mudo 22 sano ka hor.
· Abwaan Mohamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ka hadlay sida ay ku timid Heesta Hooyoy la,aantaa.
· Wararkii ugu danbeeyey Hiiraan
· Beesha caalamka oo arimahii Somaliya ku soo koobtay sedax qodob.
· Golaha wasiirada xukumada farmaajo oo si weyn ula shaqeynaya gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya iyodalka KEnya oo rajo ka qabo shirka Somaliya in lagu qabto.
· Qaramada midoobay oo siyaasadeeda arimaha Somaliya wax ka bedeshay.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo maanta kula kulmay xildhibaanadii ugu badnaa Mogdisho
· Dowlada fedralka oo dhaqanadii ay shacbaka Hiiraan ku heyn jirtay u wareejisay Gedo
· Imaatinga gudoomiyaha baarlamaanka uu yimid Mogdisho oo kilkishay magaalada.
· Ururka Shabaab oo laga yaabo iney ka tanaasulaan dagaalada mogdisho kedib.
· Qaar kamid ah golaha wasiirada TFGda iyo qabiilada ayka soo jeedaan maxaa kala heysta?
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo ku tilaamaya qaabkii dhawaantan xilka looga qaaday taliyahii ciidanka Asluubta aheyd mid aan loo marin wado sax ah.
· Xaalada Mogdisho TFGda, Shabaab iyo shirar is daba joog ah oo halkaasi ka socda.
· Shabaab oo dhaqaalo fara badan ku bixineysa wadooyinkii ay hubka u soo mari jireen oo maalmahani ka xiran magaalada Mogdisho.
· M/weynaha Hiiraan State, waxgarad, saraakil iyo dhalinyaro si weyn u soo dhaweeyey Prof Warfaa
· Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaara Hiiraan
· M/weynaha Hiiraan State Dr Mohamud Abdi Gaab oo soo dhaweeyey dadaalada ay wadaan Xildhibaanada reer Hiiraan.
· Prof Ahmed M Warfaa oo jaaliyadaha reer Hiiraan ee diabda la hadlay.
· Shabaab oo ka wal walsan maamul goboleedyada ka curtay qeybo ka mid ah dalka Somaliya.
· xildhibaanada iyo waxgaradka reer Hiiraan ee mOgdisho oo soo dhaweyey maamul goboleedka Hiiraan State
· Wasiirada Hiiraan State oo shirar muhiim ah ka wada magaalada Mogdisho
· Xayiraad dhinaca cirka ah oo lagu soo rogay qeybo ka mid ah wadanka Libiya (NO-FLY ZONE)
· Doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ka dhaceysa july Mogdisho.
· Wararkii ugu danbeeyey ee Musharaxa m/weynimada Somaliya Prof Warfaa.
· Wareysi gaaban oo aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta Hiiraan state Amb. C/qadir Abdulle Xoshow
· Wararkii ugu danbeyey dagaaladii maalmahanika socday duleedka magaalada belet weyne.
· Magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay looga dhawaaqay maamul goboleed
· Wadooyinkii ay hubka marsiin jireen Shabaabka Mogdisho oo u xiran Amisom
· Cuduro laga yaabo iney ka dhashaan dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Japan kedib.
· Xafladii Qada Sharafta ee uu xildhibaanada Somaliya u sameeyey musharaxa madaxweynaha Somaliya Halkan ka daawo.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo noqday musharaxa ugu hadal heynta badan magaalada Mogdisho
· Alqacidada Hiiraan oo ku fashilmay dagaal ay ku qaadeen ciidamada Hiiraan.
· Shir si heer sare ah loo soo agaasimay ooka dhacay dalkaasi KEnya
· Dalka Jabaan oo ay waxyeelo ka soo gaartay dhulgariir ka dhacay.
· Soomaali baan ahey ( Maqaal aad u qiima badan
· Schoolada oo ku soo badanayo tuulooyinka Hiiraan
· Wararkaa ugu danbeyey iyo Alqacidada Hiiraan.
· United Nation TV
· Shir lagu taageerayey m/weynaha mustaqbalka Somaliya oo xaley dhacay.
· Wararki ugu danbeyey iyo Hiiraan
· Mid ka mid ah xubnahii G55 ee ahaa ururkii curiyey dhismahii Hiiraan State ka hadlay arimo badan.
· Wararkii ugu danbeeyey ee Hiiraan State iyo xaalada Alqacidada Hiiraan ku sugan tahay.
· Shir lagu soo dhaweynayey madaxweynaha mustaqbalka Somaliya oo Kenya ka dhacay
· Sheekh Cumar Faaruuuq oo ku geeriyooday dalka Sucuudiga
· Maanta oo ku beegan maalinta haweenka aduunka
· Wararkii ugu danbeyey iyo dhaqdhaqaaq ka socda Hiiraan.
· Argagixisadii Hiiraan oo jahwareer xoogan ka heysto shacabka
· Qeybtii labaad golaha wasiirada Hiiraan State oo ku sii jeeda Africa
· Wasiiradii Hiiraan State oo nabad tagay Mogdisho
· Dadaaladii lagu soo dhisay Hiiraan State qeybtii labaad
· Waxgaradkii aqoonyahanadii iskugu tagay shirkii Sweden iyo Kenya ee lagu dhisay HS
· Gud.maxkamada sare Hiiraan State iyo wasiiro kale oo la kulmay Prof Warfaa
· Shir ay iskugu yimaadeen madaxda Hiiraan State oo xaley ka dhacay magaalada London.
· Wararkii ugu danbeyey madaxweynah mustaqbalka Somaliya
· Gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Somaliya oo la dooranayo July
· Madaxweynaha mustaqbalka oo gaaray dalkaasi Kenya
· Wasiirada Hiiraan State ee howlaha shaqo u joogay Kenya oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
· Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey tartanka uu galayo Prof Warfaa
· Wararkii ugu danbeyey madaxweynaha mustaqbalka umada Somaliyeed Prof Warfaa
· Madaxweynaha mustaqbalka Prof Ahmed M Warfaa oo si heersare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Mankato ee gobolka
· Urur Siyaasadeed looga dhawaaqay magaalada London iyo BBCda oo ka wareysatay Liibaan Daahir Nur
· Jaaliyada Hiiraan ee Kenya oo shirar la leh wasiiro ka socda Hiiraan State
· M/weynaha mustaqbal Prof Warfaa oo maanta ka qudbeynaya jaamacada Minnasota.
· Kulan weynahii golaha wasiirada Hiiraan State ayaa ndib loo dhigay
· Xaalada dagaaladii ka dhacay Hiiraan iyo qaasarahii ka dhashay iyo halka la kala joogo.
· Wararkii ugu danbeeyey dagaalkii ciidanka mujaahidiinta Hiiraan iyo Al qacidada Somaliya.
· Afhayeenka madaxtooyada HS oo si weyn loogu so dhaweyey London kedib howlo shaqo oo uu tagay halkas.
· Tahniyad Aroos Hasan Mohamed Ibraahim iyo Sahra Mohamed Hasan
· Ciidamada Mujaahidiinta Hiiraan oo ku sii siqaya Magaalada Balad weyne.
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo u jiheystay dhinacaas iyo Africa.
· Madaxweynaha Hiiraan State oo sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood
· Doorashada m/weynenimada Somaliya oo la qabanayo bisha May iyomusharaxiinta oo lagu xiray iney bixiyaan lacag.
· TfGda oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo ineysan diyaar u aheyn iney la shaqeyso maamul goboleedyada dalka ka jira.
· Shabaabka Hiiraan oo ka walwalsan siyaasada dowlad goboleedka HS (warbixin culus)
· Webka Hiiraan State.com oo ay maanta u buuxsantay 2 bilood
· Madaxweynaha Hiiraan State oo maanta kulan muhiim ah la yeeshay Safiirka Yemen ee Soomaaliya.
· Heestii Geed Jicibeed ee uu ka qaaday xafladii Hiiraan State
· M/weynaha mustaqbalka Somaliya oo Kenya ku siijeeda
· Baarlamaanka Somaliya oo dooranaya madaxweyne iyo gudomiye baarlamaan.
· Madaxweynaha Hiiraan State ee Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay Qunsulka guud ee dowladda Liibiya.
· Xildhibaanada reer Hiiraan oo kaga dooday Muqdisho sidii Hiiraan ay u yeelan laheyd hal dowlad goboleed
· Sawir gacmeedka isbuuca
· Wareysi aanu la yeelanay C/raxmaan Hussein Cadow(Cabdi Yare)
· Wasiirka warfaafinta DG/goboleedka Hiiraan State Amb.C/qadir Abdulle Xooshow
· Wafti ay kala hogaaminayaan wasiirada Sportiga iyo Haween Hiiraan State oo ku sii jeeda Somaliya.
· Wasiirka xiriirka gobolada HS iyo dowlada federalka oo ka qeyb galay shir ka dhacay dalka Ireland
· Madaxweynayaasha Hiiraan State iyo Galmudug State ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho.
· Walaac xoogan oo la soo dirsaday madaxda qaranka Somaliya
· Wareysi dhinacyo badan taabanayo oo ay shabakada Hiranstate la yeelatay afhayeenka ee dowlad goboleedka Hiiraan State (Elmi Yare).
· Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Hiran State oo reer Hiiraan ku guubaabiyay
· Gudoomiyaha degmada Halgan ee d/goboledka HS
· Madaxweynaha Hiiraan State oo ku dhawaaqay Guddi soo dhoweeya Wasiirada
· Madaxweynaha Mustaqbalka Prof Warfaa iyo wafti uu hogaaminayo
· Wasiirka W/warfaafinta iyo Hidaha iyo dhaqanka HS ooka hadlay.
· Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hiiraan State oo gaaray Muqdisho.
· Wasiirka Xanaanada Xoolaha dowlad goboleedka Hiiraan State oo sheegay inuu wax ka qabanayo xoolaha ku dabar go’aya abaarta
· Wasiirka Dastuurka dowlad goboleedka Hiiraan State oo sheegay in dadka reer Hiiraan
· Madaxweynaha mustaqbalka Prof Warfaa oo casuumaad rasmi ah ka helay dowlada Canada.
· Baarlamaanka Somaliya oo laka diiday iney ku darsadaan 3 sano
· Madaxweynaha mustaqbalka Somaliya Prof Warfaa oo safaro ku kala bixinaya wadamo badan
· Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiiraan State iyo Wasiirka gaashaandhiga FS oo mar kale kulmay
· Muuqaalka xafladii musharaxa madaxweynenimada Smaliya Prof Warfaa
· Shacabka Hiiraan oo ka cabanaya Shabaab, Haya'ddaha iyo kooxo jidkooyo dhigta.
· Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiiraan State iyo Xildhibaan Maxamed Cumar Xaashi oo kulan ku yeeshay Muqdisho
· Madaxweynaha Hiiraan State iyo Wasiirka gaashaandhigga dowladda FS oo maanta ku kulmay Muqdisho.
· Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Hiran State.
· Prof Warfaa oo caawa ka dhoofay Minneapols(sawiro)
· Prof Ahmed Muumin warfaa oo noqday musharaxii ugu horeeyey oo shir ka sheegay inuu u taagan yahay jagadaas 2011.
· Shirkii musharaxa M/weynenimada Somaliya oo furmayo waqti dhaw .
· Wararkii ugu danbeyey safarka musharaxa m/weynanimada Somaliya
· Inta badan hogamiyayaasha ururka Shabaab oo dalka ka cararaya
· M/weynaha Hiiraan State iyo wafi uu hogaaminayo.
· Shabaabka Hiiraan oo qabuuro bur burin ka bilaabay Hiiraan
· Gudoomiyaha maxkamada sare ee D/goboledka HS oo shacabka u soo ban dhigay sida ay maxkamada sare u shaqeyn doonoto
· Prof Ahmed Muumin Warfaa musharaxa M/weynenimada Somaliya.
· United Nation TV oo ka hadlay arimaha Somaliya
· Wasiirka Haweenka iyo Arimaha Qoyska D/goboledka HS iyo dumarka reer Hiiraan ee Canada oo ka shiray arimaha Hiiraan.
· Golahii wasiirada dowlada goboledka HS oo howlahooda shqo bilaabay.
· Madaxweynayaasha Hiiraan State iyo M/weynaha D/goboledka Kurdistaan oo Xiriir Teleefoon ah dhexmaray
· Golaha Wasiirada Xukuumadda Hiiraan State ee Soomaaliya oo ogdisho ku kulmay (Sawiro iyo warbixin)
· Hiran Youth League (HYL) oo taageeray musharaxa M/weynenimo ee 2011 Prof Warfaa
· Musharaxa madaxweynanimada Somaliya 2011 Prof. Ahmed M Warfaa.
· M/weynaha HS oo Aduunka ka codsaday in Hawada Cunto Qalalan looga daadiyo Shacabka Hiiraan.
· Kulan hordhac ah oo Golaha Wasiirada dowlad goboleedka Hiiraan State ku yeelanayaan Muqdisho.
· Madaxweynaha Hiiraan State oo sheegay
· M/weynaha HS oo kula kulmay dalkaasi Kenya beesha caalamka, ganacsatada reer Hiiraan iyo wax garad.
· Shirar iyo abaabul loogu gargaarayo shacabka Hiiraan oo ka socda waqooyiga America
· Urur siyaasadeed oo looga dhawaaqayo dalka Mareykanka.
· W/Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Soomaaliya oo la kulmay ardayda Soomaaliyeed
· R/wasaaraha Somaliya Mohamed Abdullahi Mohamed oo qudbad ka jeediyey UN_Ka muuqaal
· Qaar ka mid ah masuuliyiintii dhawaantan loomagacabay D/goboledka HS ayaa xiriir la sameyey saraakiisha ku sugan halkaas.
· Wareysi dhinacyo badan taabanayo oo ay shabakada Hiranstate la yeelatay afhayeenka cusub ee dowlad goboleedka Hiiraan State (Elmi Yare).
· Kooxda Alshabaab oo Degmada Moqokori ee Gobolka Deebley dhalinyaro ku karbaashay, xili ay dadka iyo duunyadu dhimanayaan
· Taliyaha ciidamada Booliska D/Goboledka HS oo lagu dhawaaqay.
· 4 ruux oo haraad iyo gaajo ugu geeriyooday Tuulo ku dhow Degmada Jalalaqsi.
· Dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya oo shaaca ka qaaday Barnaamijkeeda Shaqo.
· Dadka iyo duunyada oo u dhimanayo abaaraha ka jira Hiiraan iyo codsigii madaxweynaha Hiiraan oo jawaab laga bixiyey.
· Shabaabka Hiiraan oo caruurta ka qafaalaya Schoolada iyo waalidiinta oo cabsho ka muujiyey arintaas.
· Nidaamka dowlad goboleedyada Somaliya oo bilaaw fiican u ah umada Somaliyeed
· M/weynaha Hiiraan State iyo wafti uu hogaaminayo oo maanta ka soo dagay dalkaasi Kenya
· Aqoonyahan Somaliyeed oo dalka iyo dibada laga yaqaano oo isku soo sharaxayo xilka (warbixin horudhac ah xaqiiqdana u dhaw)
· Safiirka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya oo balanqaaday gargaar
· Qaar ka mid ah beelaha reer Hiiraan oo codsaday in loo magacaabo.
· Dowlad goboleedka Hiiraan State oo loo balan qaaday.
· Taageerada loo hayo dowlad goboleedka Hiiraan ee Somali oo walito iska soo daba dhaceyso.
· HS: Xukuumad tayo leh (oo tira badan)
· Shir dhinaca isgaarsiinta ah oo ay iskugu yimaadeen qurba joogta reer Hiiraan
· Xildhibaanada reer Hiiraan oo codsatay in la gargaaro shacabka Hiireen ee Abaaruhu ku dhufteen.
· M/weynaha Hiiraan State oo soo dhisay xukumad tayo leh
· M/weynaha Hiiraan State oo ku dhawaaqay golahiisa wasiirada iyo m/wenyne ku xigeen cusub.
· Tacsi ku socota dhamaan reer KHalif Guled, reer Cabdulle Indhooy iyo reer Shiikh Cismaan
· Agaasimaha cusub xafiiska R/wasaaraha Dr. Abuukar Daahir Cismaan (Baalle),
· Faa’idada reer Hiiraan ay u leedahay dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya
· Taariikhda Hiiraan iyo asalka magaca Somaliya qaabka uu ku yimid.
· Wasiirka Waxbarashada: "waxaan ku dadaaleynaa in aan Afka Soomaaliga hormarino"- SAWIRRO
· Kulankii wasiirka waxbarashada iyo Xildhibaanada reer Hiiraan ee Mogdisho.
· Duqowda Dhaqanka Hiiraan oo ugu baaqay Alshabaab
· Shir uga socda xildhibaanada iyo wasiirada reer Hiiraan magaalada Mogdisho
· Taariikhda magaalada Belet weyne (kheybtii 2aad)
· Taariikhda Magaalada Baladweyne
· Madaxweynaha Hiiraan State oo sanadkan 2011-ka u rajeeyey umada Somaliyeed inuu noqondoono sanadkii nabada.
· Is mariwaa ka taagan Shabaabka Hiiraan dhexdooda kedib markii.
· Shirkii Jaraa'id ee madaxweynaha Hiiraan State oo si weyn loo soo dhaweeyey
· Shir Jaraaid Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hiiraan: Kooxda “Alshabaab”(sawiro)
· Madaxweynaha Hiiraan State iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kulmay.
· M/weynaha Hiiraan State iyo M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka wada hadlay mustaqbalka.
· Khubaro milatari oo Soomaali ah oo soo bandhigay qorshe awooda Alshabaab ee Hiiraan State lagu wiiqi karo.
· Madaxeynaha dowladda FS Sheekh Shariif oo maanta kula kulmay Xarunta Villa Beydhabo M/weynaha Hiiraan State .
· Hiiraan State TV coming Next 72 Hrs
· Xulka qaranka Hiiraan State oo ka haray tartanka dilna ugu xukuman Shabab..
· Wariyaha sanadka Ayaanle Hussein Abdi oo dil ka bad baaday.
· Xulka qaranka Hiiraan State oo dhiiragalintii ugu weyneyd ka helay qurbajoogta reer Hiiraan.
· Afhayeenka Hiiraan State:2011 sanadkii horumarka iyo dib u heshiisiinta reer Hiiraan.
· Ayaanle Hussen Abdi oo ka mid noqday shaqsiyaadkii sanadka 2010 ugu wanaagsanaa umada Somaliyeed(Amin Arts)
· Dadaalo iyo gurmadyo loogu gar gaarayo shacabka Hiiraan oo qurbaha ka socda
· Afhayeenka Hiiraan State oo ka digay abaaraha ku habsaday dadka iyo duunyada.
· Ciyaaraha:J/hoose oo Galgaduudka badisay Nugaal iyo Hiiraan oo kaalita koowaad isku heyta Group A.
· Ma la socotaa in Hotelka ugu casrisan dalkaasi Tanzaania uu leeyahay muwaadin Somaliyeed ( Hotel Bagamooya)
· Degmada Halgan oo iibka gurayaha iyo dhulku aad u sara kacay kedib markii ay ku soo bateen Schoolada wax lagu barto(warbixin dheer)
· Qeybaha kala duwan ee bulshada reer Hiiraan oo soo dhaweyey webkan cusub (Warbixin Cabdullahi Qorshe)
· Wasiirka waxbarashada Hidaha tacliinta sare oo saacad ka hor gaaray Mogdisho 20 sano kedib.
· Waxgarad, Xildhibaano iyo madaxweynaha Hiiraan State oo shirar is daba joog ah ku leh caasimada Somaliya ee Mogdisho.
· Abwaan Mustafe Shiikh Cilmi (Ila qosol)
14,913,969 unique visits